12/01/2015 - 01/01/2016 - သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
သမ္မတ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ အတည်ပြု
တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်များ ဆိုတဲ့ စကားရပ် နေရာမှာ တာဝန်အရ ဥပဒေနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်ချက်များ လို့သာ ပြင်ဆင်
နိုင်ငံတော် သမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအား ပြင်ဆင် ချက် ၁၆ ချက် ဖြည့်စွက် ချက် ၁ ချက်တို့နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဒီဇင်ဘာ လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြု လိုက်ပါတယ်။
ဒီဥပဒေကြမ်း မှာပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ သူက နိုင်ငံတော် သမ္မတ အဖြစ် ထမ်း ဆောင်ခဲ့ သည့် ကာလ အတွင်း တာဝန် အရ ဆောင်ရွက်ချက် များကို အကြောင်းပြုလျှက် တရားစွဲဆို ခြင်းနဲ့ အရေယူခြင်း မရှိစေရ ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို ပယ်ဖျက် ပေးဖို လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် အချို့က ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အခု အချက်ဟာ လက်ရှိ ဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်း ညီ ညွတ်မှု မရှိဘူးလို့ကန့်ကွက်သူ တွေက ဆိုပါ တယ်။
ဒီလို ကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့ တစ်ပိုဒ်လုံးကို ပယ်ဖျက် တာမျိုး မလုပ်ဘဲ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်များ ဆိုတဲ့ စကားရပ် နေရာမှာ တာဝန်အရ ဥပဒေနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်ချက်များ လို့သာ ပြင်ဆင်ပြီးအတည် ပြု ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအပြင် ဥပဒေကြမ်း မှာပါတဲ့ သမ္မတရဲ့ ကိုယ်ရံတော်နဲ့ကိုယ်ရံတော်အဖွဲ့ အား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန ကခန့်အပ်သူ ဆိုတဲ့ အပိုဒ်မှာတော့ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန် ပေးအပ်သူ လို့ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် ထားပါတယ်။
အခု ဥပေဒကြမ်းဟာ ရာထူးက အနားယူမယ့် သမ္မတ နဲ့သူမိသားစု လုံခြုံရေး အတွက် ပြဌာန်းတာ ဆိုပေမယ့် သမ္မတ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့် ကိုပါ ရောပြီး ပြဌာန်း တဲ့အတွက် ဝေဖန် ကန့်ကွက် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်း ဘလော့ခ်ဂါ သတ်သူကို သေဒဏ်ချ
အာမက် ရာဂျစ် ဟိုင်ဒါ ရဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူက အခု ပြစ်ဒဏ်ဟာ မပြည့်စုံဘူးလို့ပြော
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ တရားရုံး တစ်ခုက အွန်လိုင်း ဘလော့ခ်ဂါ ကို သတ်မှု အတွက် လူ ၂ ဦးကို သေဒဏ် အပြစ်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ကတော့ တရားခံပြေး ဖြစ်ပြီး မျက်ကွယ် သေဒဏ် ချမှတ် ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ပြစ်ဒဏ် ကျခံရသူ ၂ ဦးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်က ဘာသာရေး အကြောင်းတွေ ဝေဖန် ရေးသားနေသူ အွန်လိုင်း ဘလော့ဂ်ဂါ တစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်မှု အတွက် အခုလို အပြစ်ပေးခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘလော့ခ်ဂါ အာမက် ရာဂျစ် ဟိုင်ဒါ ဟာ သူ့ရုံးခန်းထဲမှာ ရှိနေစဉ် လူတစ်စု ရဲ့ တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး အခြား ကျူးလွန်သူ ခြောက်ဦး ကိုလည်း တရားရုံးက အသီသီး ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် ခဲ့ပါတယ်။
အာမက် ရာဂျစ် ဟိုင်ဒါ ရဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူက အခု ပြစ်ဒဏ်ဟာ မပြည့်စုံပါဘူး။ အခြား ငါးယောက်က ကျူးလွန်ကြောင်း ဝန်ခံ ထားပါတယ်။ သက်သေတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ လူသတ်မှု ကျူးလွန် ကြသူ တွေပါပဲလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ် ခေါင်းဆောင်တွေဟာ စစ် ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျူးလွန် ကြသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန် ရေးသား ခဲ့သူ အာမက် ရာဂျစ် ဟိုင်ဒါ အသတ်ခံ ရမှုကြောင့် နိုင်ငံ တကာမှာ ဟိုးလေးတကြော် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကို ပြစ်တင် ဝေဖန် ခဲ့ကြပါတယ်။
NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် အစိုးရတပ် နှင့် ပထမ ဆုံးအကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ် RCSS တဦးကျ
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ၂၀၁၅
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပြင်းမြို့နယ် မိုင်းပူးဒေသတွင် အစိုးရတပ်မတော် နှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA တို့အကြား NCA စာချုပ်ချုပ်ဆို သည့်နောက်ပိုင်း ပထမ ဆုံးအကြိမ်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ၂၀၁၅ ခု မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ်အထိ ခလရ ၂၇၈ က မိုင်းပြင်းမြို့ တောင် ဘက် မိုင်းပူးလုံကျေးရွာ အုပ်စု ဘက်တွင် အခြေချ နေထိုင် သည့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်အား တိုက်ခိုက် သည်ဟု သိရသည်။
“ကျနော်တို့ကို တပ်မတော် စစ်ကြောင်းက လာရောက်တိုက်ခိုက်တာ။ ကျနော် တို့ဘက် ၁ ယောက် ကျဆုံးတယ်။ တယောက် ဒဏ်ရာရတယ်။ အစိုးရ တပ် ဘက်ကလည်း သေကြေဒဏ်ရာရတာရှိတယ်။ အရေအတွက် အတိအကျေ တာ့ မသိရသေးဘူး” - ဟု RCSS ပြောခွင့် ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလှ က ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး နောက်ပိုင်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA အား အစိုးရ တပ်မတော်ဘက်မှ ပထမဆုံး အကြိမ် တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“မိုင်းပြင်းမြို့နယ်ထဲမှာ ကျနော်တို့တပ်ခေတ် အဆက်ဆက်နေထိုင်လာတယ်။ MTA ခေတ် ကတည်းက ဘဲ။ ဘာကြောင့် ကျနော်တို့ကို လာပြီး တိုက်ခိုက် ရသလဲ ဆိုတာနားမလည်ဘူး”- ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလှ က ဆက်ပြောသည်။
တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး သည့်ေ နာက်ပိုင်း ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ စတင်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် လာမည့် ၁၅ ရက် အတွင်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မလွဲမသွေ ကျင်းပရန်ပြင် ဆင်နေချိန် ယခုကဲ့သို့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခြင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ယုံကြည်မှုလျော့ပါးစေသည်ဟု သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ဘက်က သုံးသပ်ပါသည်။
ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှ ကားခိုးယူသွားသူအား ဖမ်းမိ
ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှ ကားခိုးယူသွားသူအား မိတ္ထီလာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အချိန်တိုအတွင်း စုံစမ်းဖမ်းဆီးအရေးယူထား
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ ကျီတော်ကုန်းရပ်ကွက်နေ မဖြိုးဖြိုးသူ(ခ)ပုံ့ပုံ့(၃၂)နှစ်သည် သီးကုန်း ယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရွှေအင်းလေးစားသောက်ဆိုင် ကားပါကင်တွင် 5K/×××× Honda Insight Ze-2 အဖြူရောင်ယာဉ်အားရပ်ထားကာ သူငယ်ချင်း မတင်မိုးခိုင်နှင့်အတူ စားသောက်ပြီး ပြန်ထွက်လာစဉ် ရပ်ထားသည့်ယာဉ်မှာ ပျောက်ဆုံးနေသောကြောင့် ၎င်းနေ့ ည ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန် အရေးယူပေးရန်တိုင်တန်းရာ အလည်ရွာရဲကင်းစခန်း(ပ)၆၆/၂၀၁၅၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၇၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်စုံစမ်းခဲ့သည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် မိတ္ထီလာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရှာဖွေ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယင်းနေ့ ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန် ယင်းမာပင်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မိတ္ထီလာ-တောင်ကြီးကားလမ်းအတိုင်း တောင်ကြီးမြို့ ဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသည့် 7F/2255 နံပါတ် တပ်ဆင်ထားသည့် Honda Insight Ze-2 အဖြူရောင်ယာဉ်အား ရပ်တန့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
စစ်ဆေးချက်အရ ယာဉ်မောင်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ရွာသစ်ရပ်ကွက်နေ ဇော်ထိုက် (၃၆)နှစ်ဖြစ်ပြီး သီးကုန်းယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှ အဆိုပါယာဉ်အား ခိုးယူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နတ်မောက်လမ်းခွဲအနီးအရောက် 5K/×××× နံပါတ်ပြားအားဖြုတ်ကာ ချုံထဲသို့လွှင့်ပစ်ခဲ့ပြီး အသင့်ယူဆောင်လာသည့် 7F/2255 နံပါတ်ပြားအား ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မဖြိုးဖြိုးသူ (ခ)ပုံ့ပုံ့၏ ပျောက်ဆုံးသွားသည့် ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရသဖြင့် သက်သေခံယာဉ် သိမ်းဆည်းပြီး ဇော်ထိုက်အား အမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဥရောပ မြို့တော် တွေမှာ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်
နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ ကျင်းပ ကြမယ့် ဥရောပ နိုင်ငံက မြို့တော် တွေမှာ လုံခြုံရေး ၂ ဆ တိုးမြှင့် ချထား လိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံ မြို့တော် ဘရက်ဆဲလ်မှာတော့ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်မှာ တိုက်ခိုက်မယ်လို့ သံသယ ရှိသူ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ပြီး နောက်မှာ နှစ်သစ်ကူး ပွဲ ကျင်းပမယ့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါတယ်။
ပြင်သစ် နိုင်ငံ မြို့တော် ပဲရစ်မှာတော့ မီးရှူး မီးပန်း ဖောက်ပြီး နှစ်သစ်ကူး ပွဲ ကျင်းပ မယ့် အစီအစဉ် ကို ဖျက်သိမ်း ခဲ့ပေမယ့် အထင်ကရ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ရှမ်ဇေ လီဇေ ကိုတော့ ဖွင့်လှစ် ထားမယ် လို့ မြို့တော် ဝန် က ပြောပါတယ်။
ရုရှ နိုင်ငံ မော်စကို မြို့က ရင်ပြင်နီကို အများပြည်သူ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင် ထားပြီး လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့် ချထား လိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဲရစ်မြို့ တိုက်ခိုက်မှုမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေ လို့ သံသယ ရှိသူ လူ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်း ဘယ်လ်ဂျီယံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအား ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ ပြင်ဆင်ချက် အတိုင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတည်ပြု
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက တင်သွင်းသော နိုင်ငံတော် သမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအား ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ ပြင်ဆင်ချက် အတိုင်း ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြု လိုက်သည်။
အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ တာဝန် ကုန်ဆုံးချိန် နိုင်ငံတော် သမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် က ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကိစ္စများကို အရေးယူမှု မပြုရန် နှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်သူ၏ လုံခြုံရေးအား ဆက်လက် တာဝန်ယူရန် ဆိုသည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ တင်ပြချက်အတိုင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက် ခြိမ်းခြောက်မှုများ အတွက် အမေရိကန် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်
ဝါရှင်တန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်တွင်း လုံခြုံရေး အရာရှိများက အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နှစ်သစ်ကူး ကြိုဆိုပွဲ များ ကျင်းပမည့် နာမည်ကြီး နေရာများနှင့် နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက် များအတွင်း လုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိနိုင်မည့် နေရာများအား လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ထားကြောင်း ပြည်တွင်း မီဒီယာက ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်က တင်ပြ ထားသည်။
အဆိုပါ ခြိမ်းခြောက်မှုများ အနက် အမေရိကန်မြို့များ ဖြစ်သည့် နယူးယောက်၊ လော့စ်အိန်ဂျလစ် နှင့် ဝါရှင်တန် မြို့များတွင် ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက်များ အကြား တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဟု ပြည်ပမှ ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ရပ် ရရှိထားကြောင်း အမည်မဖော်လိုသော အကြီးတန်း အရာရှိ၏ ပြောစကားကို ကိုးကား၍ သတင်းဋ္ဌာနက တင်ပြထားသည်။ ထိုသတင်းမှာ သတင်းရင်းမြစ် တစ်ခုထဲကိုသာ အခြေခံထားပြီး အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
သတင်း တင်ပို့ထားချက်အရ အမေရိကန် လုံခြုံရေး အရာရှိများသည် နယူးယောက် Times Square နှင့် လော့စ် အိန်ဂျလစ် အနီးတွင် ပြုလုပ်မည့် ပျော်ရွှင်ဖွယ် Rose Bowl အစီအစဉ်များ ကျင်းပမည့် နေရာများအား အမေရိကန် လုံခြုံရေး အရာရှိများက လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
နယူးယောက်တွင် ရဲအရာရှိ ၆,၀၀၀၊ လုံခြုံရေး ခွေးများ၊ လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်း ကင်းလှည့်ခြင်းနှင့် လက်ဖြောင့် တပ်သားများသည် Times Square တွင် တာဝန် ချထားကြောင်းနှင့် နှစ်သစ်အကြို ball drops အစီအစဉ် အတွက် လာရောက်ကြမည့် ခရီးသွား ဧည့်သည်ပေါင်း ၁ သန်းခန့်အား လုံခြုံရေး ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း နယူးယောက် မြို့တော်ဝန်က ပြောသည် ။
မြန်မာသင်္ဘောသား ၇ ဦး ကို ထိုင်းရေတပ်က ကယ်ဆယ်
ဘန်ကောက် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ။
အင်္ဂါနေ့ (၂၉-၁၂-၂၀၁၅) ညနေ ၅ နာရီ အချိန် ခန့်က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖူးခက်ကျွန်းအနောက်ဘက် ရေမိုင် ၅၀ ခန့်တွင်နစ်မြုပ်ခဲ့သော မြန်မာကုန်တင်သဘောင်္ပေါ်တွင် လိုက်ပါခဲ့သည့် မြန်မာသဘောင်္သား ၇ ဦးကို ထိုင်းရေတပ်က ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းတွင် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ကဖော်ပြသည်။
နစ်မြုပ်သွားသော သဘောင်္မှာ "အောင်ချက်ဆာ " ဟုအမည်ပေးထားသောသဘောင်္ဖြစ်ကြောင်း၊
အလျား ( ၂၇ ) မီတာ ၊အနံ( ၅. ၅)မီတာ ရှိသော ကုန်တင်သဘောင်္ဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းသဘောင်္သည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မလေးရားနိုင်ငံ ပီနန်ကျွန်းသို့ထွက်ခွာလာသည့်သဘောင်္ဖြစ်ကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
၃၀-၁၂-၂၀၁၅ နံနက် ၂ နာရီတွင် သဘောင်္နစ်မြုပ်ကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပြီး၊ ထိုင်းရေတပ် ကကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လေယာဉ်တစ်စင်းနှင့်ရေတပ်သဘောင်္ တစ်စင်းတို့ကို စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ တဖြည်းဖြည်းနစ်မြုပ်နေသော မြန်မာသဘောင်္ပေါ်မှသဘောင်္သားများကို ထိုင်းရေတပ်သဘောင်္က ည ၈ နာရီအချိန်ခန့်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လှိုင်းလေထန်သည့် ပင်လယ်ပြင်တွင် မြန်မာသဘောင်္သားများကိုခက်ခဲစွာကူညီ ကယ်တင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာသဘောင်္သားအားလုံးမှာ ဒဏ်ရာရရှိထားမှုမရှိကြောင်း၊ ၄င်းတို့အားလုံးကို ယနေ့ ( ၃၁-၁၂- ၂၀၁၅) နံနက်ပိုင်းတွင် ဖူးခက်ကမ်းခြေသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူများက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
"မြန်မာသဘောင်္သားတွေ အရမ်းကိုပျော်နေကြပါတယ်.။ သူတို့ကပြောတယ် ၊သူတို့က တစ်စ တစ်စ နစ်မြုပ်နေတဲ့သဘောင်္နဲ့အတူ ရေပေါ်မှာပေါ်နေကြတာပါ တဲ့၊ သူတို့ကို ရေတပ်သဘောင်္သားတွေက ဓါတ်မီးအလင်း လေးနဲ့တာမြင်နိုင်တာပါ တဲ့ ၊ အရမ်းကံကောင်းပါတယ် တဲ့ .. ဟု ဖူးခက်ကမ်းခြေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးChamroen Thipayaphongthada ကပြောကြောင်းလည်း ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
PHOTO BY - Bangkok Post
နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မှီ နည်းပညာတွေ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပထမဆုံး တရုတ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ( စက်တင်ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၁၅)
တရုတ်နိုင်ငံဟာ သူ့ရေတပ်ကို နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မှီ နည်းပညာတွေနဲ့ တဟုန်ထိုး ချဲ့ထွင်လာတဲ့အနေနဲ့ ဒုတိယမြောက် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို စတင်တည်ဆောက်နေပြီလို့ ဒီကနေ့မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းက နည်ပညာရှင်တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းက ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Dalian မှာ ဒီလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို တည်ဆောက်နေတာလို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ Yang Yujun ကပြောပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစီးကို တည်ဆောက်နေတယ်လို့ အစောပိုင်းတွေကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းကို တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဒီကြေညာချက်က အတည်ပြုပေးလိုက်တာပါ။ ကာကွယ်ရေးနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေ လုပ်နေတဲ့ IHS Janes အဖွဲ့ရဲ့ စက်တင်ဘာတုန်းက ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ပထမဆုံး ပြည်တွင်းဖြစ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကို တည်ဆောက်နေပြီး ဂြိုလ်တုက ရရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေအရ သင်္ဘောရဲ့ ပင်မအစိတ်အပိုင်းဟာ မီတာ ၂၄၀ အရှည်ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းက ကျွန်းတွေကို သူပိုင်ကိုယ်ပိုင် အငြင်းပွါးမှုမှာပါဝင်တဲ့ တရုတ်ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်တော့ အခုလို လေယာဉ်တင် သင်္ဘော တည်ဆောက်နေတာကြောင့် စိုးရိမ်မှုတွေ ပိုတိုးလာနေပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Liaoning ကိုတော့ ယူကရိန်းနိုင်ငံက ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး တရုတ်မှာ ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့တာပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အဲဒီသင်္ဘောကို တရုတ်နိုင်ငံရေတပ်မှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆစ်ဒ်နီဆိပ်ကမ်းမှာလုပ်မယ့် နှစ်သစ်ကြို မီးရှူးမီးပန်း ပစ်လွှတ်ပွဲ
ကမ္ဘာတ၀န်းမှာ ၂၀၁၆ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြမယ့်ထဲ အခု ကျနော်တို့ ရုပ်သံအစီအစဉ် လွှင့်နေချိန်မှာတော့ နှစ်သစ်ကို အစောဆုံး ကြိုဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲကတခုဖြစ်တဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာ နှစ်သစ်ကူးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က တခြားမြို့ကြီးအများအပြားမှာလိုပဲ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ Wellington မြို့တော်နဲ့ တခြားမြို့ကြီးတွေက နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ တွေကို လုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားတဲ့အောက်မှာ ကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံဟာလည်း နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုခွင့်ရတဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံတခုဖြစ်ပြီး အခု ကျနော်တို့ ရုပ်သံအစီအစဉ် အဆုံးသတ် မယ့် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇ နာရီခွဲမှာတော့ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြတော့မှာပါ။
ဆစ်ဒ်နီဆိပ်ကမ်းမှာလုပ်မယ့် နှစ်သစ်ကြို မီးရှူးမီးပန်း ပစ်လွှတ်ပွဲကို အကောင်းဆုံးနေရာကနေ ကြည့်ရဖို့အတွက် အခုချိန် ကတည်းကိုက လူထောင်ပေါင်းများစွာ စုဝေး စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီး လူတသန်းကျော်ထိ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၁ သန်းဖိုးလောက်ရှိမယ့် မီးရှူး မီးပန်းတန်ချိန်ပေါင်း ၇ တန်လောက် သုံးမယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါ တယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံတ၀န်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား တိုးချဲ့ချထားပြီးတော့ အဓိကမြို့ကြီးတွေမှာ မပြတ်ကင်းလှည့်နေကြပြီး လုံခြုံရေးကို အထူးတင်းကျပ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုင်စွဲသူတွေက တိုက်ခိုက်နိုင်ခြေရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာတ၀န်း တချို့မြို့ကြီးတွေမှာ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ တွေကိုမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ ဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့တော်မှာ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကို မြို့တော်ဝန်က ပယ်ဖျက်ထားပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရီမြို့တော်မှာလည်း မီးရှူးမီးပန်း ပစ်ဖောက်မယ့်အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်ထားပြီး နှစ်သစ်ကြို ညနေခင်းအစီအစဉ် တွေကိုလည်း လျှော့ချထားပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကာလအတွင်း တိုက်ခိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ အကြံအစည်တခုကို ဖော်ထုတ် လိုက်နိုင်ပြီးတဲ့နောက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့တော်မှာလည်း လုံခြုံရေး အထူးတင်းကျပ်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဒေသအသီးသီးက နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲတွေထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ နယူးယောက်မြို့၊ Times Square က နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ လုံခြုံရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ချထားပါတယ်။ ဒီပွဲကိုလည်း လူတသန်းကျော် လာမယ် လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
နယူးယောက်နဲ့ အမေရိကန် တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလုပ်မယ့် နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲတွေကို တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီး အခိုင်အမာ ခြိမ်းခြောက် ထားတာမျိုး မရှိဘူးလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ FBI နဲ့ အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော်တ၀န်း နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြမယ့်ပွဲတွေထဲမှာတော့ မိုင်ဒါကွင်နဲ့ သုဝဏ္ဏ မိုးလုံလေလုံ အားကစားကွင်းရှေ့တို့မှာ ကျင်းပမယ့် နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲတွေက အကြီးဆုံးနဲ့ လူအများဆုံးသွားမယ့်ပွဲတွေ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
ဒီနေ့ည ၁၁ နာရီ ၅၀ မိနစ်မှာ မြန်မာ့အသံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းစကား တွေကို ထုတ်လွှင့်ဖို့ရှိပါတယ်။ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်မှာတော့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတိယသမ္မတတွေဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ထွန်းနဲ့ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းတို့ရဲ့ နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်းစကားတွေကို ထုတ်လွှင့်ပါ့မယ်။ အဲဒီနောက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းစကားကို ထုတ်လွှင့်ပြီး နှစ်သစ်ကူးချိန် စက္ကန့်ရေတွက်တာကို ထုတ်လွှင့် မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းကတော့ နှစ်သစ်ကူးဆန္ဒမွန်ဆိုပြီး နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောဆို ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကို သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားပါတယ်။
လင်မယားချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်စဉ် ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေပေးတဲ့ အိမ်နီးဖြစ်သူ ဓားထိုးခံရ
ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားသူကို လှည့်ကင်း မီးတန်းယာဉ်များမှ နာရီပိုင်းအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိ
၃၀.၁၂.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၀၀ အချိန်ခန့်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာမအနောက် ရပ်ကွက်နေ ဂျပု(ခ)စိုးမင်းတို့ လင်မယားချင်း စကားများရန်ဖြစ်စဉ် အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ ကိုခင်မောင်ထွေးမှ ၀င်ရောက်ဖျန်ဖြေရာ ဂျပု(ခ)စိုးမင်းက ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့၍ ကိုခင်မောင်ထွေးတွင် ယာဘက်နံကြား၌ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်ရရှိခဲ့ပြီး အင်းစိန်ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာ(မစိုးရိမ်ရ)အဖြစ် ကုသလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ဂျပု(ခ)စိုးမင်းမှာ ထွက်ပြေး တိမ်ရှောင် သွားကြောင်း တို့ကို အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်း နယ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ သတင်းရရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အင်းစိန်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် နယ်မြေအတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် လှည့်ကင်း တာဝန်ဆောင်ရွက်နေသော မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ လှည့်ကင်းမီးတန်းယာဉ်အမှတ်(၄၀၁)၊ အင်းစိန်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လှည့်ကင်း မီးတန်းယာဉ်အမှတ်(၄၀၂)နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လှည့်ကင်း မီးတန်းယာဉ် အမှတ်(၄၀၃)တို့အား ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားသူ ဂျပု(ခ) စိုးမင်းအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ပူးပေါင်း
ယင်းသို့ လှည့်ကင်းမော်တော်ယာဉ်များ ပူးပေါင်းရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့သည့်အတွက် ၂၁၃၀ အချိန်တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ဂျပု(ခ)စိုးမင်းအား အင်းစိန်မြို့နယ်၊ တညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ တညင်းကုန်းဈေးရှေ့၌ အရိုးအသွား(၁၀)လက်မခန့်ရှိ ဓားဦးချွန်တစ်ချောင်းနှင့်အတူတွေ့ရှိပြီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ဂျပု(ခ)စိုးမင်း၊ (၂၂)နှစ်အား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်း (ပ)၁၃၈၄/၂၀၁၅၊ လက်နက်များအက်ဥပဒေပုဒ်မ-၁၉(င)နှင့် (ပ)၁၃၈၅/၂၀၁၅၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၂၆ တို့ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ကျွဲကူး လှေထောက်ကျင်းမှာ စက်လှေနှစ်စီး မီးလောင်နေ
31 12 2015 ရက်နေ 4း20 ခန့်က မြိတ်မြို့နယ် ကျွဲကူး လှေထောက်ကျင်းမှာ တိုးတက်အောင်
လှေနှင့် အခြားလှေတစ်စီး - ပေါင်းနှစ်စီး မီး စတင်လောင်ကျွမ်းနေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
သတင်း - Ko Ye
April Maung Maung (facebook)
တိုင်းပြည်ကို စစ်အစိုးရ အနှစ် (၂၀) ကျော် ကြီးစိုးပြီးလို့ (၂၀၁၁) မှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာ ဒေသဆိုင်ရာမှာ အောက်ဆုံးအဆင့် ရောက်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့  နှစ်စဉ် အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု တန်းဖိုးဟာ အဆင်းရဲဆုံး အာဆီယံနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ လာအို နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့  တဝက်ပဲ ရှိတယ်လို့ IMF အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကာလမှာ သန်းကြွေးသူဌေး ဒေါ်လာစား ဗိုလ်ချုပ်လူတန်းစား ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်မှာ လောလောဆယ် လိုအပ်နေတဲ့ ဒေါ်လာသန်း (၄၀) ကို ဒီလူတန်းစားက အသာလေး ပေးနိုင်ပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီး မကြာမီ (၁၉၉၀) မှာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေရှင်းကို တည်ထောင်ပါတယ်။ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့  အစုရှယ်ယာ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်ရုံးကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်တိုင်း (၁၂) ခု၊ ရဲဘော်ဟောင်းအသင်းနဲ့ အငြိမ်စားစစ်ဗိုလ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီဟာ နိုင်ငံခြားနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း အများအပြားလုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းဟာ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်း ဥ့ပဒေအောက်မှာ မရှိတဲ့အတွက် စိတ်ကြိုက်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိ တိုးချဲ့ နိုင်ပါတယ်။ အစိုးရအသုံးစရိတ်မှာလည်း စစ်စရိတ်က အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
သယံဇာတ တူးဖော်မှု၊ မူးယစ်ဆေး ထုတ်လုပ်မှု၊ တရားမဝင် အခွန်ကောက်ခံမှု၊ အဓမ္မစေခိုင်းမှု စတာတွေကလည်း စစ်တပ်စီးပွားရေးကို အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ဝန်ကြီးဌာန (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဒေါ်လာသန်း (၇၀) လောက် အလွဲသုံးစား လုပ်ထားတယ်လို့ စာရင်းစစ်ချုပ်က (၂၀၁၂) မှာ လွှတ်တော်ကို တင်ပြဖူးပါတယ်။ စီးပွားရေး နဲ့ နိုင်ငံရေး အခွင့်ထူးရယူတဲ့ စစ်တပ်ဟာ စစ်ရေးမှာ ညံ့ဖျင်းလာတယ်လို့ စစ်ရေးသုတေသီ Andrew Selth က နိုဝင်ဘာလထုတ် Griffith တက္ကသိုလ်စာတမ်းမှာ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ တပ်ပြေးများတဲ့ စစ်တပ်မှာ စစ်ဗိုလ်များပြီး စစ်သားစုဆောင်ဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့တွေကို ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါ အကျအဆုံးများတာဟာ အစိုးရတပ်မှာ ခေါင်းဆောင်မှုအားနည်းပြီး နည်းဗျူဟာညံ့ဖျင်းလို့ ဖြစ်တယ်လို့ Andrew Selth က သုံးသပ်ပါတယ်။
အရင် ဗိုလ်နေဝင်း ကြီးစိုးတဲ့ မဆလခေတ်က တပ်ရင်းတရင်းရဲ့  အင်အားကို (၇၀၀) ကျော် သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ ခြေလျှင်တပ်ရင်းတရင်းရဲ့  စစ်သည်အင်အားဟာ အများဆုံး တစ်ရာလောက်သာ ရှိတယ်လို့ သုတေသီဂါမဏိ က နိုဝင်ဘာလထုတ် (၁၅) ရက်နေ့ထုတ် မိုးမခစာစောင်မှာ ရေးထားပါတယ်။ ခြေလျင်၊ ခြေမြန်တပ်ရင်း (၅၂၀) ကို ပျှမ်းမျှနှုန်းနဲ့တွက်ရင် တပ်ရင်းတရင်းမှာ စစ်သား (၈၀) လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတွေကို စစ်ထဲသွင်းနေတာ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်နဲ့ ဗိုလ်သင်တန်းတွေက နှစ်စဉ်မွေးထုတ်တဲ့ ဗိုလ်အရေအတွက်ဟာ (၃၀၀၀) ကနေ (၅၀၀၀) အထိ ရှိတယ်လို့ သုတေသီ ဂါမဏိ က ထောက်ပြထားပါတယ်။
ဒီအတိုင်းဆိုရင် အစိုးရတပ်မှာ စစ်ဗိုလ်ဦးရေနဲ့ စစ်သားဦးရေ ညီတူညီမျှ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိပါတယ်။ Andrew Selth ကတော့ အစိုးရတပ်မှာ အင်အား (၃) သိန်း ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြကြောင်း ဖော်ပြပါတယ်။ ခေတ်မီစစ်တပ်ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး စစ်လက်နက်ဝယ်တာကို အဓိက ထားနေပုံရပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ (၂၀၁၁) ကနေ (၂၀၁၄) အထိ စစ်ပစ္စည်း ဒေါ်လာသန်း (၁၆၀၀) ဖိုး ဝယ်ယူတယ်လို့ Andrew Selth ရဲ့  အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ စုစုပေါင်းမှာ အင်အား (၁) သိန်းလောက် ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းတာကြောင့် ခေတ်မီလက်နက်ကြီးတွေ ဝယ်ယူစုဆောင်းနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စစ်ခေါင်းဆောင် အသိုင်းအဝိုင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာလာပြီး စစ်တပ်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များလာသလို စစ်မှုရေးရာမှာ ကျွမ်းကျင်မှု ကျဆင်းတာဟာ ဒီခေတ်ရဲ့  ထူးခြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တပ်ဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုရဖို့သာ စိတ်ဝင်စားနေပုံ ရပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း ယူထားတာ စစ်အုပ်စု အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ စစ်အုပ်စု နဲ့ ဒေါ်လာဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့  အကျိုးစီးပွား မထိခိုက်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အရပ်သားကိုယ်စားလှယ်နဲ့ လက်တွဲနိုင်မယ့်သဘော ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်အဖွဲ့လို့ ယူဆရတဲ့ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အပေါ်စီးရအောင် ဥပဒေပြဌာန်းဖို့ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်က စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိုတော့ လုံးဝဆန့်ကျင်ပါတယ်။
စစ်အုပ်စု အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်တယ်လို့ ယူဆရင် တုံ့ပြန်မယ့် အဖွဲ့အစည်းကတော့ စစ်ဗိုလ်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ရေးကို နှောင့်နှေးသွားအောင် (သို့မဟုတ်) ပျက်စီးသွားအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရပ်သားအစိုးရနဲ့ အခွင့်ထူးခံ စစ်အုပ်စုဆက်ဆံရေးဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ပြည်သူ့အကျိုး သယ်ပိုးဖို့အတွက် စစ်တပ်ဟာ ဘယ်လို ပြောင်းလဲနေသလဲ ဆိုတာကို ပြသဖို့ လိုပါတယ်။ စစ်တပ်အနေနဲ့ မိမိဘာသာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှသာ ပြည်တွင်းပြည်ပက အယုံအကြည် ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြေဆီ သြဇာတွေဖြစ်တဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ ဖေါ့စဖရပ် ဓါတ်တွေ လေထုထဲမှာ ဖြစ်စေ၊ ရေထုထဲမှာ ဖြစ်စေ ရှိသင့်တာထက် သိပ်ပြီးများနေတာကို သြဇာဓါတ် ညစ်ညမ်းမှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီညစ်ညမ်းမှုဟာ သဘာဝန်းကျင် ပြဿ နာတွေထဲမှာ စိန်ခေါ်မှု အများဆုံး ပြဿ နာ တခုလို့ သဘာဝ ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ ဒေါ်အေးအေးကြည်က ပြောပါတယ်။
ဒီလို သြဇာဓါတ်ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့ အချက်တခုက ရေပြင်မှာ ရေညှိရေမှော်တွေ သိပ်များပြီး စိမ်းနေတာမျိုးပါ။ အင်းလေးဒေသမှာ ရေညှိရေမှော်တွေ သိပ်များလာ သလို ရေရဲ့ အရည်အသွေးကျဆင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ ဖေါ့စဖရပ် ဓါတ်တွေ ဂေဟစံနစ်တခုအတွက် ရှိသင့်တာထက် များနေတာကြောင့်ပါ။
ဒီရေညှိရေမှော်တွေ ကနေ အဆိပ်အတောက်တွေ ထွက်သလို ဘက်တီးရီးယားတွေ ပါ တိုးပွါးလာတတ်ပါတယ်။ ရေချိုရေငံနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဂေဟစံနစ်မှာ ပေါက်ရောက်တဲ့ အပင်တွေ၊ ရေညှိရေမှော်တွေကို ငါး၊ ခရုအပါအဝင် ရေသတ္တဝါတွေက စားသုံး တာပါ။ သြဇာဓါတ်ညစ်ညမ်းမှု ရှိတဲ့ ဝန်းကျင်က ဒီသတ္တဝါတွေကို လူတွေက စားသုံးမိရင် လူသားတွေအတွက်လည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဒီညစ်ညမ်းနေတဲ့ ရေဟာ မြေအောက်ရေထဲကိုလည်း ရောက်သွားနိုင်တာမို့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။
သြဇာဓါတ်ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်နေတဲ့ ရေကို သောက်သုံးမိရင် ပမာဏ နဲပေမယ့် အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်။ ခလေးငယ်တွေမှာ သက်ရောက်မှုက သိသာလှပါတယ်။ blue baby လို့ခေါ်တဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆိပ်သင့်ကလေးငယ်ဟာ အသားတွေ ပြာနှမ်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေက အောက်ဆီဂျင်မရပဲ အသက်ပါ အန္တရာယ်ရှိနိုင် တာပါ။
အင်းလေးဒေသမှာ နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ ဖေါ့စဖရပ်ဓါတ်တွေကို စိုက်ပျိုးရေးကနေ အဓိက ရပါတယ်။ မြေသြဇာအဖြစ်သုံးတဲ့ ဒီဓါတ်တွေကို ကျွန်းမျောတွေမှာ အလျှံပယ် သုံးပြီး စိုက်ပျိုးကြတာမို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ရင်းမြစ်တခုက လူနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ မစင် အညစ်အကြေးတွေက ရတာမို့ မိလ္လာ စံနစ်ကို သေသေချာချာ ချထားဖို့ လိုပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးအတွက် သုံးတဲ့ တချို့ဆပ်ပြာတွေမှာ ဖေါ့စဖိတ် ပါဝင်တတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အလာများတဲ့ အင်းလေးမှာ အင်းသားတွေသာမက ဧည့်သည်တွေ သုံးတဲ့ ဆပ်ပြာအပါအဝင် ဓါတုပစ္စည်းတွေကလည်း သြဇာဓါတ် ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စေတဲ့ ရင်းမြစ်တွေပါ။ ဒီလို ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သူတွေကလည်း လူသားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သြဇာဓါတ်ညစ်ညမ်းမှု ဒဏ်ကို နှစ်ရှည်လများ ခံစားရမယ် ဆိုရင် သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် တင်သာမကပဲ စီးပွါးရေးအရပါ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
​ဒေါ်ခင်မျိုးသက် / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
ရုရှားတိုက်လေယာဉ်များက တူရကီသို့ သွားရောက်မည့် ISIS အဖွဲ့၏ ဆီသယ်ယာဉ် အစင်း ၂၀ ကို ဖျက်ဆီး
မော်စကို ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အိုင်ဒလစ်ဘ် ပြည်နယ်မှ တူရကီနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် ISIS စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့၏ မှောင်ခိုဆီသယ်ယာဉ် အစင်း ၂ဝ ကို ရုရှား တိုက်လေယာဉ် များက ဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ကြောင်း ရုရှားကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက်တွင် ပြောကြား ထားကြောင်း Sputnik သတင်းတစ်ရက် အရ သိရသည်။
ထို့ပြင် ရုရှားလေတပ်သည် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ရက်အတွင်းက ISIS စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့ ထိန်းချုပ်ထားရာ ဒီယာအက်ဇော နှင့် အလက်ပိုပြည်နယ် တို့မှ ရေနံချက်စက်ရုံ ခြောက်ခုကို ဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် အိုင်ဂေါကိုနာရှန်ကော့ဗ် က ပြောကြားသည်။
''လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး လက်နက်များ တပ်ဆင်ထားသည့် ယာဉ်များ ခြံရံကာ ဆီးရီးယား-တူရကီ နယ်စပ်သို့ သွားရောက်မည့် မှောင်ခိုဆီ သယ်ယာဉ်တန်း တစ်ခုကို အိုင်ဒလစ်ဘ် ပြည်နယ် အတွင်း လေကြောင်း ကင်းထောက်မှု တစ်ခုမှာတွေ့ရှိ ခဲ့တယ်။ အဲဒီယာဉ်တန်းကို ရုရှားလေတပ်က Su-34 တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်းတည်းဖြင့် ချေမှုန်း နိုင်ခဲ့တယ်'' ဟု ကိုနာရှန်ကော့ဗ် က ပြောကြားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်မှစ၍ ၄၈ နာရီအတွင်း ရုရှားတိုက်လေယာဉ် များသည် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု ၁၂၁ ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး အလက်ပို၊ အိုင်ဒလစ်ဘ်၊ လက်တာကီးယား၊ ဟားမား၊ ဟွမ်းစ်၊ ဒမတ်စကပ်၊ ဒါရား၊ ရက္ကာနှင့် ဒီယာအက်ဇော ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ISIS စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့၏ အဓိကစစ်အခြေစိုက် စခန်းတစ်ခု အပါအဝင် ပစ်မှတ် ၄၂၄ ခုကို ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြား ထားသည်။
ထို့ပြင် အိုင်ဒလစ်ဘ်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ အယ်နျူဆရာ တပ်ဦး သူပုန်အဖွဲ့၏ လက်နက်တိုက်ကြီး တစ်ခုနှင့် Osa လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည် စနစ်ကိုလည်း ရုရှားတိုက်လေယာဉ် များက ချေမှုန်းနိုင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြု
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြု လိုက်သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းတွင် အပိုဒ် (၂) ပိုဒ်ပါရှိပြီး မူလ ဥပဒေကြမ်း၏ ပုဒ်မ ၉ အား အစားထိုး ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြခဲ့သည့် ပြင်ဆင်ချက်အား ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းပြင်ဆင်ချက်မှာ ပုဒ်မ ၉ ပါ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ သက်တမ်း နှင့်အညီ ဟူသော စကားရပ်နေရာတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ရာထူး သက်တမ်း အတိုင်း ဟူ၍ စကားရပ်ကို အစားထိုး ပြင်ဆင်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည့် အချက်အား ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရားမဝင် ကုန်သွယ်ရေး တားဆီး ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီအား ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆင်ဟွာကို ယနေ့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
တရားမဝင် ကုန်သွယ်ရေး တားဆီး ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟို ကော်မတီအား ဖျက်သိမ်း လိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက် ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးး၏ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅ ပါရက်စွဲ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၇၉/၂၀၁၅ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၉၇/၂၀၁၂) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု တားဆီးထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီအား ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် မှ စတင်၍ ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ Mobile Team အားလုံး၏ ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများအား ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် ညနေ ၄ နာရီမှ စတင် ရပ်စဲ၍ Mobile Team အားလုံး ဖျက်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် ထဲတွင် ပါရှိသည်။
ပေါ်တာဆွဲခံရသည့် ရွာသား တိုက်ပွဲတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာရ၊ ကျန်တစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
စစ်တွေ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ သပြုချောင်းကျေးရွာ မှ မြန်မာစစ်တပ် ၏ ပေါ်တာဆွဲ ခံရသည့် ရွာသားနှစ်ဦးတွင် တစ်ဦးမှာ တိုက်ပွဲအတွင်း ဒဏ်ရာ ရရှိသွားပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
ပေါ်တာဆွဲခံရ၍ ဒဏ်ရာရရှိသွားသူမှာ သပြုချောင်းကျေးရွာမှ ဦးသန်းစိန် (၃၂) ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စစ်တွေဆေးရုံတွင် တင်ထားရပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ သေမှန်း ရှင်မှန်း မသိ ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု ဦးသန်းစိန်၏ ဆွေမျိုးတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဦးသန်းစိန်သည် ၎င်းဒဏ်ရာဖြင့် တောထဲတွင် ၃ရက်ခန့် နေခဲ့ရပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နေရာမှ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် လာကာ ကျောက်တော်မြို့နယ် သရက်သတပင် ကျေးရွာ လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့မှ အကူအညီဖြင့် ကျောက်တော်ဆေးရုံသို့ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
လက်မောင်းမှာ ကျိုးသွားပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရန် လိုအပ် သဖြင့် ကျောက်တော် ဆေးရုံမှ စစ်တွေဆေးရုံသို့ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ တွင်ပို့ဆောင်ခဲ့ရာ စစ်တွေဆေးရုံသို့ ည ၈နာရီ အချိန်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် စစ်တွေ ဆေးရုံ၌ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခဲ့ရပြီး လူနာမှာ စိုးရိမ်စရာမရှိဟု သိရသည်။
မြန်မာတပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်အကြား ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ် နယ်စပ် အကြား ကျောက်တော်မြို့နယ် ရမ်းချောင်း တောင်တန်း များတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေရာ ယခု အရပ်သား တစ်ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိမှုမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ် မဟာမုနိ ဘုရားအနီးရှိ သရက်တပင်ကျေးရွာမှ ဦးစံထွန်း ပြောပြချက်အရ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့် နေရာမှာ သူတို့ရွာမှ ၄-၅ မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး သေနက်သံများကိုလည်း နေ့စဉ် ကြားနေရသည်ဟု ဆိုသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာမှ သေနတ်သံများကို နေ့တိုင်းကြားနေကြရသဖြင့် ရွာသားများ အကြား စိုးရိမ်ထိတ်လန့် နေကြသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
လက်မောင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိထားသော ဦးသန်းစိန်ကို စစ်တွေဆေးရုံကြီး တွင် ဆေးကုသခံယူနိုင်ရန်အတွက် သရက်တပင် လူမှုကွန်ရက်မှ ခုသောင်းကျပ်၊ ကျောက်တော်မြို့ လူမှုကွန်ယက်မှ တစ် သိန်း ကျပ်၊ ကျောက်တော်ဆေးရုံမှ ဆရာဝန် တစ်ဦးမှ တစ်သိန်းကျပ်နှင့် စစ်တွေ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ငါးသောင်းကျပ် ကူညီ လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်နေ့ နံနက် ၀၉း၅၀ အချိန်ပဲခူးမြို့ မြို့မ ရဲစခန်းအပိုင် တောင်သူစုကျေးရွာတွင်
လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
သေဆုံးသူမှာ မခင်မာဝေ(၃၀)နှစ် အုန်းသာယာရပ်ကွက် တောင်သူစုကျေးရွာ နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှာ မိုးဇော်ဝင်း(၃၄)နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ ပဲခူးမြို့မရဲစခန်းမှဒုရဲမှူးစိုးပိုင်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ အချိန်မှီရောက်ရှိ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုလည်း ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလို့ သိရပါတယ်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွင်လည်း (စိုးရိမ်ရ) လည်ပင်း ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာရရှိထား တာကြောင့် လတ်တစ်လော ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် ပဲခူးပြည်သူဆေးရုံကြီးမှ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများက ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ကုသခွဲစိတ်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် နေကြောင်း သိရပါတယ်။
သတင်း - ဓါတ်ပုံ ။ ။ ဇော်ရှင်း (FACEBOOK)
ဝေါမြို့ဝင်အမှတ်(၂)တံတားတွင် ယာဉ်တိုက်မှု ထပ်မံဖြစ်ပွား၍ လူသေဆုံး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ်အဝင် အမှတ် (၂)တံတားတွင် ဒီဇင်ဘာ(၃၀)ရက် ယနေ့နံနက်( ၆ )နာရီအချိန်ခန့် က ယာဉ်တိုက်မှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်
ဖြစ်စဉ်မှာ ကျိုက်ထိုဘက်မှ ရန်ကုန်ဘက် သို့ မောင်းနှင်လာသော Honda Fit အနက်ရောင်ယာဉ်နှင့်
ရန်ကုန်မြို့မှကျိုက်ထိုမြို့သို့ မောင်းနှင်လာသော စူပါကတ်စတန် ခဲရောင်ယာဉ်တို့ မိုင်တိုင်အမှတ်(်၆၉/၇နှင့်၇၀/၀့ )ကြားတံတားအမှတ် (၂/၇၀)နေရာတွင် တိုက်မိခြင်း ဖြစ်သည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်Honda Fit ယာဉ်အားမောင်းနှင် လာသော ကန်ကြီးထောင့်ကျေးရွာ ပုသိမ်မြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူ ယာဉ်မောင်အသက်(၄၀)ခန့်ရှိဗွီနိုင်းဆိုသူ အမျိုးသားတစ်ဦး ဆုံးပါးခဲ့ကြောင်း စူပါကတ်စတန် ယာဉ်ပေါ်မှ အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ များရ ရှိခဲ့ပြီး ၎င်း အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးမှာ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသူ Mei Yaung Waung ဆိုသူဖြစ်ပြီး ဝဲဘက်ပေါင်ကျိုး၍ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများအရသိရှိရသည်။
၎င်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပက်သက်၍ ဝေါမြို့မရဲစခန်းမှ ယာဉ်(ပ)၇၆/၂၀၁၅ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၄-က /၃၃၇/၃၃၈ ဖြင့်အမှုဖွင့်လှစ်အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းကလည်း အဆိုပါတံတားအနီးတွင် ယာဉ်နှစ်စီးတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဆုံးပါးခဲ့ကြောင်း တံတားပြုပြင်နေသည့် အချက်ပြဆိုင်းဘုတ် လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် အချက်ပြ မီးစနစ်များ အားနည်းသည်ဟု ဝေါမြို့ခံများကြား ယာဉ်တိုက်မှု မကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဝေါမြို့အဝင့်် တိုးချဲ့ပြုပြင်နေသည့်အမှတ် (၂)တံတားနှင့် ပက်သက်၍ ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရသည်
ပုသိမ်- ချောင်းသာ ကားလမ်းဘေးမှ လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုဆိုသူ လာရောက်အဖမ်းခံ
ပုသိမ် - ချောင်းသာ ကားလမ်းဘေးရှိ ဥတိုကျေးရွာအနီးတွင် ခေါင်းပြတ်လျက်
သေဆုံးနေသည့် အမျိုးသား အလောင်းအတွက် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှာ ကိုယ်တိုင်
လာရောက် အဖမ်းခံခဲ့ကြောင်း ချောင်းသာ ရဲစခန်းမှ သိရှိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အမှုအတွက် ပြစ်မှု
ကျူးလွန်သူမှာ ညတွင်းချင်း ချောင်းသာရဲစခန်းသို့ လာရောက် အဖမ်းခံခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ကြောင်း ချောင်းသာရဲစခန်မှူး ဦအုန်းကျော် က ပြောသည်။
“တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရန်ငြိုးရန်စတော့ မရှိပါဘူး။ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့က
အထင်လွဲ ပြီး ဆဲကြဆိုကြရင်း နဲ့ ခေါင်းပြတ်တဲ့အထိ ဓားနဲ့ ခုတ်ခဲ့တာလို့
သိရပါတယ်” ဟု ချောင်းသာ ရဲစခန်းမှူးက ပြောသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့က သေဆုံးသူမှာ ဖုန်းလိုင်းမကောင်းသည့်အတွက်
တစ်ဦးတည်း ဆဲဆိုနေရာမှ လမ်းတစ်ဖက်ရှိ ကိုင်းများ မီးရှို့နေသည့်
ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု ဝန်ခံထားသူမှ မိမိကို ဆဲတာလားဟု မေးမြန်းရာမှ
တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အပြန်အလှန် ဆဲဆိုကာ ဓားခုတ်မှုအထိ ဖြစ်ပွား
ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ချောင်းသာရဲစခန်းမှ သိရသည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးနေသည့်နေရာမှာ ပုသိမ်-ချောင်းသာကားလမ်းဘေး တစ်ဖက်
တစ်ချက်တွင် ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးစိန်ခေါ်ကာ ဓားကိုယ်စီဖြင့် ထွက်ခဲ့ရာမှ
ကားလမ်းဘေးတွင် ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွား ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဥတိုကျေးရွာ
“သူတို့တွေနေတဲ့ အိမ်တွေက ရွာနဲ့ ဝေးတဲ့ တဲစုလေးတွေမှာနေတာ။ သေတဲ့
ကောင်လေးဆိုရင် ရာဘာခြံမှာ တစ်ယောက်တည်း လာလုပ်နေတာ။ ခုတ်တဲ့
ကောင်လေးကတော့ မိန်းမ ယောက္ခမနဲ့ အတူတူနေတာ။ အဲ့နေ့က သူက ညနေ ၄
နာရီ လောက်ကတည်းက ကိုင်းတွေ မီးရှို့နေတာတော့ တွေတယ်။ နောက်ပိုင်း
ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာတော့မသိဘူး” ဟု ဥတိုကျေးရွာနေ ဦးအုန်းသန်းက
ယခုအခါ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု ရဲစခန်းတွင် ဝန်ခံထားသူ ဆိုးပေ ၂၆ နှစ်အား
ချောင်းသာ ရဲစခန်းက (ပ)၈၆/၂၀၁၅ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၀၂(က) ဖြင့် အမှုဖွင့်
ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသမီးများ အပါဝင် မူဆယ်ဒေသခံ အနည်းဆုံး လူ ၂၀ ကျော်ခန့်ကို ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၄ မှ ဖမ်းဆီးထား
ဒေသခံ ရှမ်းနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးများ အပါအ၀င် မူဆယ် ဒေသခံ
အနည်းဆုံး လူ ၂၀ ကျော်ခန့်ကို ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) မှ ဖမ်းဆီးထားကြောင်း
‘ကျန်တေ်ာတို့ဆီမှာ စာရင်းရတာ အနည်းဆုံး ၁၅ ဦး ရှိနေပြီ ကျန်တဲ့ ရွာတွေမှာ
လည်း တစ်ရွာ ၇ ယောက်နှုန်းလောက်နဲ့ စစ်သားပေးဖို့ တောင်းနေတာ တချို့
လည်း ပေးနေရတယ်ကြားတယ် ။ စာရင်းကတော့ ထပ်စုနေဆဲပဲ ရက်ပိုင်းအတွင်း ၊
ဒီလထဲမှာကို ကေအိုင်အေက ဆွဲသွားတာ” ဟု မူဆယ် ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
အသင်းမှ စိုင်းယဉ်လိတ်က ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် The Ladies news
ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့နှင့် ၂၉ ရက်နေ့တို့တွင် မူဆယ်မြို့နယ် နမ့်အွမ်း
ကျေးရွာအုပ်စု၌ ကျင်းပသည့် ရှမ်းနှစ်သစ် ကောက်သစ် ကောက်သစ်စားပွဲတော်ကို
ကျင်းပခဲ့ရာ အဆိုပါ ပွဲတော်ကို လာရောက်သည့် ရှမ်းနှင့် တအာင်းပလောင်
အမျိုးသမီးများ အပါဝင် စုစုပေါင်း ဒေသခံ ၁၅ ဦးကို ကေအိုင်အေမှ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့
ကြောင်း ဒေသခံများမှ The Ladies news သို့ တညီတညွတ်တည်း ပြောဆိုသည်။
“ကျန်တော်တို့ နမ့်အွမ်ရွာက ပွဲတော်ကို လာတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ကုန်တာ ၊ ရုပ်လည်း
ဆိုးတယ် ၊ ကေအိုင်အေ လုပ်ရပ်ကို ကန့်ကွက်ပါတယ်” ဟု နမ့်အွမ်ဒေသခံဖြစ်သူ
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၄ အနေဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးမှုများ အပါဝင် မူဆယ်
ဒေသတွင်း ကျေးရွာများကို တစ်ရွာလျှင် လူ (၇) ဦးကျ စစ်သားစုဆောင်းမှုအတွက်
ပေးကြရန် (သို့မဟုတ်) မပေးနိုင်ပါက ရန်ပုံငွေထည့်ရန်လည်း အကြောင်းကြားစာ
များ ပေးပို့ထားကြောင်း မူဆယ်ဒေသခံ ရှမ်းအသိုင်းဝိုင်းမှ အတည်ပြု ပြောဆိုပြီး
တအာင်းပလောင် လူငယ်များကလည်း တအာင်းပလောင် အမျိုးသမီးများပါ
ဖမ်းဆီးခံရမှုများ ရှိနေကြောင်း The Ladies သို့ အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
‘မူဆယ် ပန်ဝိုင်းဘက်မှာ တအာင်းပလောင် လူငယ် အမျိုးသမီးတွေရော အမျိုးသား
တွေရော အဖမ်းခံလိုက်ရတယ် ကေအိုင်အေက ဆွဲသွားတာ’ ဟု တအာင်းပလောင်
ဒေသအတွင်း သတင်းများကို အဓိက ရေးသားထုတ်ဝေနေသည့် လားရှိုးအခြေစိုက်
မားနဂါးဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာ မိုင်းကောင်းဆိုင်က ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မူဆယ်အခြေစိုက် ရှမ်းစာပေ
ယဉ်ကျေးမှု အသင်းကလည်း ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာာချက်တစ်ရပ်ကို
ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားပြီး လူငယ်များကို မိဘများထံ
ပြန်လည် အပ်နှံရန်လည်း တောင်းဆိုထားသည်။
‘ကျန်တော်တို့က တိုင်းရင်းသား အရေးအတွက် တော်လှန်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ဘ၀တူ
တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး တစ်ချိန်လုံး သူတို့ဘက်က ရပ်ခံပြောဆိုပေးခဲ့တယ်။ အခုလို
လက်နက်အားကိုးနဲ့ ပြည်သူတွေ အမျိုးသမီးတွေကို အနိုင်ကျင့်တာ တော်တော်
ရုပ်ဆိုးတယ် ။ ရှုံ့ချပါတယ်” ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD မှ
ပြောခွင့်ရ ဦးစိုင်းလိတ်က ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကေအိုင်အေ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ထံ
The Ladies မှ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ခရီးသွားနေသောကြောင့်
ကေအိုင်အေနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကမူ တပ်မဟာ (၄) မှ ဖမ်းဆီး သွားသည်
ဆိုသည်မှာ မှန်ကန်ပါက ကေအိုင်အေမှ ပြန်လည် စိစစ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း
“တပ်မဟာ (၄) က ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ ရှိနေတော့ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုနဲ့
အနည်းငယ်ဝေးနေတဲ့ အခြေနေမှာ ရှိနေပါတယ်” ဟု ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်မှ
ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနှင့် မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူ
ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကမူ “ကျန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ တိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင်တွေ အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ စစ်အစိုးရကို တော်လှန်ရင်း စစ်တပ်က
လုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုပါ လိုက်ပြီး ကျူးလွန်မိတာတွေ ရှိတယ်။ အဓမ္မမှုဆိုတာ
မကောင်းပါဘူး။ ဒီပြသ၁နာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ရှမ်းမြောက်မှာ
ကချင်တွေရှိနေတာ ၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှမ်းတွေရှိနေတာ ခံနေရတာတွေကို
တော်လှန်ရေး လုပ်နေတာပဲဆိုပြီး မျက်ကွယ်မပြုသင့်ဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ် ‘ ဟု
ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ရှေးဟောင်းခံတပ် တစ်ခု၌ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊ တစ်ဦးသေဆုံး၊ ၁၁ ဦးဒဏ်ရာရ
မော်စကို ၊ ၃၁-၁၂-၂ဝ၁၅
ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဒါဂီစတန်ဒေသရှိ သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်းခံတပ် တစ်ခုသို့ လာရောက် လည်ပတ်သော ခရီးသွားအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ကို သေနတ်သမား တစ်ဦးက ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ပစ်ခတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ တစ်ဦးသေဆုံးပြီး ၁၁ ဦးဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက်တွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထားသည်။
''ပစ်ခတ်မှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက် အနေနဲ့ လူ ၁၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး သူတို့ထဲက တစ်ဦးကတော့ သေဆုံးသွားခဲ့ ပါတယ်'' ဟု တာဝန်ရှိသူ များ၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကား၍ RIA Novosti သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ဒဏ်ရာရရှိသူ များကို ဆေးဝါး ကုသမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးလျက် ရှိပြီး ၄င်းတို့အနက် လေးဦးမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေ တွင်ရှိကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ခရီးသွားအဖွဲ့မှာ ဒေသခံ ပြည်သူများဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့သည် ဒါးဘန့်မြို့ရှိ ခံတပ်အပေါ်မှ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အလှကို ကြည့်ရှုနေစဉ် အမည်မသိ အမျိုးသား တစ်ဦးက ခံတပ်အနီးရှိ တောအုပ် အတွင်းမှ နေ၍ ပစ်ခတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယင်းခရီးသည် များအနက် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ပါဝင်ပြီး တစ်ဦးမှာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း Interfax သတင်းဌာနက ဖော်ပြ ထားသည်။
ဒါဂီစတန်ဒေသ သည် ရုရှားတပ်ဖွဲ့ များက အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက် သူပုန်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ တိုက်ခိုက်မှုများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည့် မြောက် ကော့ကေးဆပ် ဒေသအတွင်းမှ မူဆလင်လူမျိုး အများစု
နေထိုင်ရာ ဒေသဖြစ်ပြီး ပစ်ခတ်မှု များနှင့် ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသည့်ဒေသ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် ခရီးသွားများကို တိုက်ခိုက်မှုသည် ပုံမှန် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု မဟုတ်ကြောင်း နှင့် ယင်း သေနတ်သမားကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရှာဖွေစုံစမ်းမှုများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘာရိန်းနိုင်ငံမှ F-16 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်း ဆော်ဒီအာရေဗျတွင် ပျက်ကျ
ရီယာဒ် ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅
ယီမင်နိုင်ငံရှိ ရှီးယိုက်ဟူသီ အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ဦးဆောင်သော ညွန့်ပေါင်း တပ်ဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည့် ဘာရိန်းနိုင်ငံမှ F-16 တိုက်လေယာဉ်သည် နည်းပညာ ချွတ်ယွင်းမှု ကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက်က ဆော်ဒီနိုင်ငံ အတွင်း ပျက်ကျခဲ့ကြောင်း ညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ က ထုတ်ပြန် ထားသည်။
အဆိုပါ တိုက်လေယာဉ်သည် ဆော်ဒီနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဂျာဇန်ဒေသ၌ ပျက်ကျခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော် လည်း လေယာဉ်မှူးမှာ အသက်ရှင်လျက် လွတ်မြောက် လာခဲ့ကြောင်း ယင်း ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်း တိုက်လေယာဉ်၏ အပျက်အစီး အပိုင်းအစများကို ယခုအခါ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘာရိန်းစစ်ဘက်မှ စစ်သည်နှစ်ဦး သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်က ဆော်ဒီ-ယီမင် နယ်စပ်အနီး သေ ဆုံးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ ပြီးနောက် အဆိုပါ လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆော်ဒီဦးဆောင်သော ညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ သည် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြု လက်ခံထားသော ယီမင်သမ္မတ မန်ဆူအာဟာဒီ ၏ တောင်းဆိုချက်ကြောင့် ယီမင်နိုင်ငံ အတွင်းရှိ ဟူသီလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ကို လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်မှာ ကိုးလခန့် ရှိပြီဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါ ပဋိပက္ခများ စတင်ဖြစ်ပွားသည့် အချိန်မှစ၍ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၊ ဘာရိန်းနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံတို့မှ မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြား သေဆုံး ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံသည် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သေဆုံးမှု တတိယ အများဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေ ကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးမှာ ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ ဆိုက်ကားဆရာတွေနဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ တွေ့ဆုံစဉ်။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေဆိုတာ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ကိုက်ညီခြင်းမရှိတဲ့အတွက် သူတို့အစိုးရလက်ထက်မှာ ဒီကိစ္စကို အမြန်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်လို့ ပြောဆိုလိုက် ပါတယ်။
RFA က ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်အတွက် မနေ့က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ သူက အခုလို ပြောကြားခဲ့တာပါ။
"အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေဘာတွေဆိုတာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်လေ၊ ဒါပေမဲ့ ဒါကို နေ့ချင်းညချင်း ကျမတို့ မလုပ်ပါဘူး၊ သေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့မှလုပ်မှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ သိပ်လည်းအချိန် မဆွဲချင်ဘူး၊ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျအောင်လို့ အမြန်ဆုံးလုပ်မှပဲ ဒီနိုင်ငံဟာ အဆင်ချောသွားမှာပါ"
လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ကျင်းပမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို လွှတ်တော်တာဝန်တွေ များနေတာကြောင့် သူတက်ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ သူတို့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ လစာငွေရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် တလုံးတခဲ တည်း နိုင်ငံရေးပင်စင်ချီးမြှင့်ငွေတွေကို နိုင်ငံ့အကျိုးရှိမယ့် စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် လှူဒါန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"အဲ့ဒီဟာတော့ ကျမတို့ ယူမယ်လေ၊ အားလုံးက ဥပဒေကရတယ်ဆိုတော့ ကျမတို့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေလည်းရတယ်၊ ကျမတို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံး သဘောတူပြီးပြီ၊ ဒီငွေတွေကို ပူးပေါင်းပြီးတော့ နိုင်ငံကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် လှူဖို့ဆိုပြီးတော့ ကျမတို့ ဆွေးနွေးထားတယ်"
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲချိန်မှာ အသက်ရှင်သန် နေထိုင်ခွင့် ရပြီး နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက် ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခု ရရှိနေတာကို မြန်မာပြည်သူပြည်သား အားလုံး ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြပါလို့လည်း နှစ်သစ်ကူး စကားလက်ဆောင် ပါးလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်မှာ နားဆင်ပါ။
ထန်းတပင် ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် ထန်း တပင်မြို့မှ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်းကာ အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမားခြောက်ဦးသည် ပေါင်းသတ်ဆေး များပါဝင်သော ရေနှင့်ထမင်း/ဟင်းချက်ပြုတ် စားမိရာမှ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၄င်းတို့သည် ထန်းတပင်မြို့မှနေ၍ ယခု ဒီဇင် ဘာလဒုတိယအပတ်မှစတင်၍ မြဝတီမြို့ တောင်ဘက်မိုင် ၅ဝ ခန့်အကွာ ဝေါလေမြို့ အနီးရှိ သစ်စက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အလုပ်မစတင်မီ ပြောင်းစိုက်ခင်းအတွင်းရှိ တဲဟောင်းတစ်လုံးတွင် နေထိုင်ကြပြီး သောက်သုံးရေ အလွန်ရှားပါး သည့်အတွက် တဲအနီးရှိ ပေါင်းသတ်ဆေးထည့် သည့် ဖိုက်ဘာပုံးအတွင်းရှိ ရေနှင့်ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်စားသောက်ခဲ့ရာ နောက်တစ်နေ့တွင် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၍ မြဝတီဆေးရုံသို့ တက်ရောက်ကုသခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် နေပြည်တော် ခုတင် (၁ဝဝဝ) ဆေးရုံကြီးသို့ ရွှေ့ပြောင်းကုသခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ဦးစိုးစိုး(၅ဝနှစ်)၊ သီရိဟေမာရပ်ကွက် နေသူနှင့် ကိုကြည်နိုင် (၄၄နှစ်)တို့ သေဆုံးသွား ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်၌ ဦးထွန်းမြင့်မောင် (၅ဝနှစ်) ဒီဇင်ဘာ၂၈ ရက်တွင် မောင်ဝေဖြိုး ကျော်(၂ဝနှစ်)နှင့် ကိုဖိုးကျော် (၄ဝနှစ်) အောင် မင်္ဂလာရပ်ကွက်တို့သေဆုံးကာ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်တွင် ကိုမြိုင် (၄ဝနှစ်) အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်နေသူတို့သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ''သူတို့ ထမင်းမချက်ခင် ရေကို နမ်းကြည့်သေးတယ်။ ဘာအနံ့မှ မရဘူးလို့ပြောတယ်။ ရေကလည်း အတော့်ကိုရှားတာ၊ သွားခပ်ဖို့ကလည်း တော်တော်ဝေးတယ်။ အဲဒီရက်ပိုင်းမှာ မိုးရွာ တော့ ပိုးသတ်ဆေးထည့်သုံးတဲ့ ဖိုက်ဘာပုံးထဲ မှာ ရေကရှိနေတော့ အဲဒီရေကိုပဲသုံးလိုက်တာ''ဟု သေဆုံးသူများနှင့် ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးဖို့ သံတမန်ရေးကြိုးပမ်း
ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်နှစ်ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံ ကော့တောင် အပန်းဖြေကျွန်းမှာ သတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ သေဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ၂ ဦး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ နေ့စဉ်ဆက်တိုက် ဖြစ်လာနေချိန်မှာ အခြေအနေကို အေးအေးဆေးဆေး ထိန်းသိမ်းကြဖို့ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီအမှုကို အခြေခံပြီး အရှိန်မြင့်လာတဲ့ ထိုင်းဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို မထိခိုက်စေချင်ဘူးလို့လည်း နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေက ပြောဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားနှစ်ယောက်ကို သတ်မှုနဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား နှစ်ယောက်ကို သေဒဏ်စီရင်ထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Don Pramudwinai က မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့ တယ်လီဖုန်းဆက် ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း မနေ့က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ ဒီအမှုမှာ ထိုင်းတရားရုံးရဲ့အမိန့်ဟာ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်သေးတဲ့အတွက် အယူခံ ဆက်ဝင်ဖို့ ရှိနေတာကို သူ့အနေနဲ့ နားလည်တဲ့အကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြန်ပြောပြပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ထိုင်းသံရုံး ကောင်စစ်ဝန်ဌာန ယာယီ ပိတ်ထားရပြီး ဗီဇာလျှောက်တာနဲ့ ခရီးသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်နားထားရပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတချို့က မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ယောက်အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်မပြင်ဘူးဆိုရင် ထိုင်း ကုန်ပစ္စည်းတွေကို သိပိတ်မှောက်မယ် ဆိုပြီးတော့တောင် ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမောင်ကတော့ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ငဲ့ပြီး မြန်မာလူငယ် ၂ ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ကိုဇော်လင်းတို့အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို ထိုင်းတရားရုံးက ပြန်လည် စဉ်းစားမယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း မနေ့က ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မြန်မာသံရုံးက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အထူးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်မှာ အခုလို ပြောဆိုပါတယ်။
“အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်။ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရချင်းလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဒီကလေးတွေဟာ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအယူခံမှာ ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကို ထောက်ရှုပြီးတော့ ထည့်သွင်း စဉ်းစားသွားလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။”
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ ဆန္ဒပြဖိအားပေးတာတွေကြောင့် ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို ပြင်ပေးမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ခုခံပြောဆိုထားပြီး ထိုင်းတရားဥပဒေ နည်းလမ်းအရ အယူခံဝင်နိုင်ခွင့် ရှိတဲ့အကြောင်း လမ်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမောင်က ပြောဆိုပါတယ်။
“ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရနဲ့ ထိုင်းဥပဒေအရ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် အယူခံဝင်နိုင်ကြောင်း လမ်းခင်းပေးတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ ဆက်လက် အယူခံဝင်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒီကလေးတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ဆက်လက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Dej Udom ကတော့ ထိုင်းဥပဒေအရ ရက်သုံးဆယ်အတွင်း အယူခံဝင်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ် စစ်ဆေးဖို့ ကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ အယူခံဝင်ခွင့် သတ်မှတ်ရက် ထပ်တိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးရဲ့ အယူခံကို ထိုင်းအယူခံတရားရုံးက လက်ခံစဉ်းစားဖို့ တနှစ်ကနေ သုံးနှစ်အထိ ကြာနိုင်တယ်” - လို့လည်း ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Dej Udom ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း အဂါင်္နေ့က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းသံအမတ်ကြီး Pisanu Suvanajata ဟာ မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံပြီး အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိုင်းတရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ မိတ္တူတွေကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ကလည်း ထိုင်းတရားရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ အညီ အယူခံ အဆင့်ဆင့် တက်သွားမယ့်အကြောင်း ပြောဆိုတာကို မြန်မာအစိုးရပိုင် သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ညွန်ကြားထားသလို မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ဦးအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို ပြန်လည် စဉ်းစားပေးဖို့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငကို သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ထားပါတယ်။
တနှစ်ကျော်ကြာ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ကာလအတွင်း ဒီအမှုကို စီရင်ချက် မချခင်ကတည်းက မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ယောက်ကို စွပ်စွဲခံထားတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ရေး ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ကူညီဖို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကို အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။
လောလောဆယ် ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ကူညီဖို့အတွက် အဖွဲ့ဝင် ၂၁ ဦးပါ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဒီရှေ့နေများအဖွဲ့၊ မြန်မာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးကို ထောက်ရှုသောအားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က ပြစ်ဒဏ်လျော့ပေါ့ရေး စဉ်းစားပေးဖို့၊ ဥပဒေဘောင်ထဲက အယူခံဝင်မှာဖြစ်သလို၊ ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကလည်း သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် အနီးကပ် ပါဝင်ကူညီမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွှတ်တော်အတွင်း ကြားနာပွဲတွေမှာ မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ ဖြေကြားထားပါတယ်။
ဦးသိန်းထိုက်ဦး / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
ထိုင်းစီရင်ချက်အပေါ် ဆန္ဒပြမှုကြောင့် ဘုရားသုံးဆူမှာ လုံခြုံရေးတင်းကျပ်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း သေဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂ ဦး မျှတတဲ့ တရားစီရင်ရေး ရရှိရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေတာကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့မှာ ထိုင်းဘက်က လုံခြုံရေး တင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ထိုင်းဘက်ကိုကူးပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ အခက်တွေ့သွားစေပြီး ကုန်သွယ်ရေးလည်း နှေးကွေးသွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲတွေရှိနေတဲ့ မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာတော့ လုံခြုံရေးကို ထူးထူးခြားခြား တင်းကျပ်တာ မရှိဘူးလို့လည်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသိင်္ဂီထိုက် က ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂ ဦးအတွက် တရားမျှတမှု ရရှိရေး ဆန္ဒပြပွဲကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလည်း ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် ဘုရားသုံးဆူမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်ကနေစလို့ ရက်ခြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် ထိုင်းဘက်က လုံခြုံရေး တင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့ ဘုရားသုံးဆူဒေသခံ ကိုထူးက ပြောပါတယ်။
“နည်းနည်းတော့ နှေးသွားတာပေါ့။ ဟိုဘက်လည်း ကျနော်တို့ ဒီကနေ ပစ္စည်းကလည်း ဟိုဘက်ကို ပို့လို့ အဆင်မပြေပေါ့။ အပေါ်ကဟာလည်း ဒီဘက်ကို အဆင်းလည်း နည်းနည်း ကြန့်ကြာတာပေါ့။ သွားလို့တော့ ရတော့ရတယ်။ အခါတိုင်းလိုမျိုး အလွယ်တော့ မရတော့ဘူးပေါ့။ နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲသွားတာပေ့ါ။ ကျနော်တို့ ဒီဘက်ကတော့ ဘာမှ မရှိဘူးခင်ဗျ။ ဒီတိုင်း အရင်လိုပဲ ပုံမှန်ပဲ။ ဆန္ဒပြတဲ့အချိန် တချက်ပဲပေါ့နော်။ အဲဒီနေရာမှာပဲ ကျနော်တို့ နယ်ခြားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ပေါ့။ အဲဒီမှာပဲ ရဲတွေ သူတို့ ကင်းယူထားတာတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ ဥပမာ - ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပေါ့။ အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်။ ဒီလို တခြားအချိန်ကတော့ ဘာမှမရှိဘူး။ ယူထားတာလည်း မရှိပါဘူး။ တပ်ကရော၊ ရဲရော လုံခြုံရေးယူထားတာ ဘာမှ မရှိဘူး။”
ထိုင်း-မြန်မာကုန်စည် အ၀င်အထွက်လည်း အရှိန်လျော့သွားပြီး စက်သုံးဆီ၊ စားဆီ တို့လို ထိုင်းဘက်က သွင်းကုန်တွေကတော့ ဒေသတွင်း သိသိသာသာ ဈေးတက်သွားသလို မြန်မာဘက်က အလုပ်သမားတွေ ထိုင်းဘက်ကူးပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့လည်း အခက်အခဲ ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဒေသခံ ကိုထူးက ပြောပါတယ်။
“မနက်အစောကြီး အလုပ်သမားတွေက သွားတယ်။ သွားတဲ့အခါကျတော့ ဆန္ဒပြတာနဲ့ ဆုံတဲ့အခါကျတော့ ဆန္ဒပြတဲ့အထဲမှာ အလုပ်သမားတွေ ပါတာလည်းရှိတယ်လေ။ စက်ရုံကို စောစောရောက်တဲ့သူကတော့ သူ အလုပ်ရုံတော့ ရောက်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ စက်ရုံတက်တဲ့အချိန်ကျတော့ ဒီ လူအင်အားမပြည့်လို့ ဘာညာဆိုတော့ ဒီစက်ရုံက ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်ခင်ဗျ။ သူတို့ဘက်ကလူက အပြည့်မလာဘူးဆိုတော့ စက်ရုံက အလုပ်မခေါ်တော့ဘူး။ ပြန်ပြီးတော့ လူတွေကို လွှတ်လိုက်တယ်။ တချို့ကျတော့လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက်ကတည်းက စက်ရုံကို ၇ ရက်တို့၊ ၆ ရက်တို့ အဲ့လိုမျိုး ပိတ်လိုက်တာရှိပါတယ်။”
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ၂ ဦးတို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က သတ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၂ ဦးကို ထိုင်းတရားရုံးက သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ် မကျေနပ်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံတ၀ှမ်း ဆန္ဒပြနေကြတာမှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့မှာလည်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးချိန်မှာ စတင်ကြတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ လူပေါင်းရာနဲ့ချီ ပါဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့ အခု နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆန္ဒပြသူတွေ နည်းပါးလာပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေ အရှိန်လျော့သွားပေမဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကတော့ ပုံမှန် မဖြစ်သေးဘူးလို့လည်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန် ဘန်ကောက် လေကြောင်း ခရီးစဉ်တွေ ပုံမှန်ပျံသန်း
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား လူငယ်နှစ်ဦးကို မုဒိမ်းမှု၊ လူသတ်မှု စွဲချက်တွေနဲ့ သေဒဏ် ချမှတ်လိုက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ မကျေမနပ် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်နေပေမယ့် ၊ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း MAI ရဲ့ ရန်ကုန်နဲ့ ဘန်ကောက် ပျံသန်းပြေးဆွဲနေတဲ့ လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေ ပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိနေမှာ ဖြစ်ကြောင်း MAI က ပြောပါတယ်။
ခိုတောင်းကျွန်းအမှု စီရင်ချက်ကြောင့် ရန်ကုန် ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်တွေကို လျှော့ချတာ၊ ဖျက်သိမ်းတာတွေ လုပ်မှာမဟုတ်ဘဲ၊ မူလအတိုင်း ပျံသန်းနေမှာဖြစ်ကြောင်း MAI ရဲ့ လက်ထောက် အထွေထွေမန်နေဂျာ က ပြောပါတယ်။
MAI ရဲ့ ရန်ကုန် ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်ကို တစ်ရက် နှစ်ကြိမ် ပြေးဆွဲနေပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ထိုင်းသံရုံးကတော့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် ဗီဇာ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကို ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ကနေ ၃ဝ ရက်နေ့အထိ သုံးရက် ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
မုံရွာ ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ
မုံရွာမြို့လယ်တွင် တည်ရှိသော သီရိရတနာဈေးအတွင်း ဈေးရုံ လေးရုံအနက် အနောက်မြောက် ထောင့်ရှိ ဈေးရုံ၌ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်က မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားရာ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ် ၁၅ စီး၊ ရေသယ်ယာဉ်ခုနစ်စီး၊ သန္ဓေ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရန်မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရကြောင်း သိရ သည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ဈေး အတွင်းရုံလေးရုံအနက် အနောက် မြောက်ထောင့်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၇၂ ခန်း ပါ (၉၆ x ၄၈) ပေ သွပ်မိုးအုတ်ခင်း အကာမပါဈေးရုံတစ်ရုံ မီးလောင်ခဲ့ သည်။
အဆိုပါဈေးရုံတွင်ရှိသော ကုန်စုံ ဆိုင်ရှစ်ခန်း၊ စက်ချုပ်ဆိုင်ခြောက်ခန်း၊ ငှက်ပျောဆိုင်တစ်ခန်း၊ ကွမ်းပစ္စည်း ဆိုင်သုံးခန်းနှင့် အခန်းလွတ် ၃၈ ခန်း မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မီးလောင်သည်ဟု သတင်းရလျှင် ရခြင်း မုံရွာမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်ငါးစီး၊ ရေသယ် ယာဉ်တစ်စီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်စခန်းမှ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ် တစ်စီး၊ ရေသယ်ယာဉ်တစ်စီး စုစု ပေါင်း မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ် ၁၅ စီး၊ ရေသယ်ယာဉ်ခုနစ်စီး၊ သန္ဓေမီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၊ အများပြည်သူများ စုပေါင်း မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ ည ၁၂နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် မီးလုံးဝငြိမ်းသွားကြောင်း သိရသည်။
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှ ဆန္ဒပြကျောင်းသား သုံးဦး ကျောင်းပြန်လည် အပ်နှံခွင့်ရရှိ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းမျက်နှာစာတွင် လက်ပံတန်း
မြို့နယ် ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဖြင့် ထောင်
ဒဏ်ကျခံရသည့် ကျောင်းသားသုံးဦး အား ကျောင်းမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ရာမှ ကျောင်းအပ်
ခွင့် ပြန်လည်လက်ခံလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းသားများထံမှ သိရှိရသည်။
“သူတို့တွေရဲ့ အပြစ်ဒဏ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးအရဖြစ်ပြီး ကျောင်းနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်
ဘူးလို့တော့ မဆိုချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းပြန်
လက်ခံလိုက်တာဟာ သူတို့ လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေကနေ
အရေးယူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းအပ် လက်ခံရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ အောင်အောင်မင်းက
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဖြစ်သည့် ကိုအောင်ဆန်းဦး၊
ကိုဥာဏ်လင်းထက်၊ ကိုဂျစ်တူးတို့ ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းပြန်
တက်ခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း
“ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းပြန် တက်ခွင့်ရဖို့ ကျောင်းကို သတိပေးစာတစ်စောင်
ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် နေ့မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာကျောင်းကို
သွားတဲ့အခါ ဒုတိယပါချုပ်က ကျောင်းအပ် လက်ခံကြောင်း ပြန်လည်ပြောခဲ့တဲ့
အတွက် ကျောင်းအပ်ပြီးစီးပါပြီ” ဟု ရတနာပုံ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား
သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကိုဂျစ်တူးက ပြောသည်။
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် ကျောင်းသားများအား
လက်ပံတန်းမြို့ တွင် ဖြိုခွဲဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းအား ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် ကျောင်း
သားများ လွတ်မြောက်ရေး၊ စစ် အစိုးရကျဆုံးရေး စာသားများအား ရတနာပုံ
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသုံးဦးက တက္ကသိုလ် ကျောင်းနံရံ တွင် မှုတ်ဆေးဖြင့်
ရေးဆွဲ ခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီှး နိုင်ငံတော်
အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မ ၁၄၃ တို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ်
ခြောက်လ ကျခံစေရန် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး
အမရပူရမြို့နယ် တရားရုံးက အမိန့်ချ မှတ်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်
မန္တလေးမြို့ အိုးဖိုထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
သူရဦးရွှေမန်း၏ နှစ်သစ်ကူးဆန္ဒမွန် (ခရစ်နှစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်)
( မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့ညတွင် ထုတ်လွှင့်မည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥ့က္ကဋ္ဌ၏ ပြည်သူများသို့ နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းအမှာစကား )
❖ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ယနေ့မှစ၍ နှစ်ကုန်အထိ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။ ဘေးဘယာအပေါင်းနှင့် ကင်းဝေးကြပါစေ။
❖ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့၊ တစ်စုနှင့်တစ်စု စေတနာမေတ္တာ၊ သံယောဇဉ်တရားများကို မှန်ကန်စွာ ထိန်းသိမ်း ထားရှိ နိုင်ကြပါစေ။
❖ ယနေ့ကာလသည် ပြည်သူများ၏ဆန္ဒနှင့်အညီ အပြောင်းအလဲပြုလုပ်၍ အကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ရရှိရေးကို ပိုမိုမျှော်လင့် နိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။
❖ ယနေ့ကာလသည် ပြည်သူလူထု၏ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကို လုံခြုံမှုပေးနိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသော၊ ခေတ်မီတိုးတက်သော ပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုရရှိလာပြီဖြစ်သည်။
❖ ယနေ့ကာလသည် ရရှိလာသောအခွင့်အလမ်းကောင်းများကို အမိအရ အသုံးပြုရမည့် အချိန်လည်းဖြစ်သည်။
❖ ဤသို့ဖြင့် အမျိုးသားအချင်းချင်း ပိုမိုပြန်လည်သင့်မြတ်ကြပြီး ထားရှိထိန်းသိမ်းသင့်သော မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များ ရရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။
❖ ဆက်လက်ပြီး စေတနာမှန် လုပ်နည်းမှန်များဖြင့် အစဉ်အမြဲ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါလျှင် မြန်မာတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို တနေ့တခြား မြှင့်တင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
❖ ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီကလည်း ရောက်ရာအရပ်မှာ ကျရာတာဝန်ကို ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တာဝန်ကျေစွာ ပါဝင်ထမ်းရွက်ပြီး နိုင်ငံအတွက်၊ ပြည်သူအတွက်၊ နိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာအတွက် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြု ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ်။
✔ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများ ပြည့်ဝကြပါစေ။
✔ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံ့သားကောင်း၊ နိုင်ငံ့သမီးမွန်များ ဖြစ်ကြပါစေ။
Posted by H.E. Thura U Shwe Mann on Wednesday, December 30, 2015
လာမယ့် ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၁၆ ရက်နေ့တွေမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Rancho Mirage မြို့မှာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား တို့ တွေ့ဆုံပြီး ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတခု ကျင်းပမယ့်အကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလထဲ အာရှတိုက်ခရီးစဉ်အတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေကို သမ္မတ အိုဘားမား ဖိတ်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ခုလို အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်မယ့် စည်းဝေးပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် အိမ်ရှင်အဖြစ် တာဝန်ယူ ကျင်းပခြင်းအားဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက အာဆီယံနဲ့ ဆက်ဆံလာတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေကို ပိုမိုခိုင်မာလာအောင် တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်သလို၊ သမ္မတ အိုဘားမား အစိုးရရဲ့ အာရှတိုက်မှာ ချိန်ခွင်လျှာညှိမယ့် အစီအစဉ်ကို ပိုမို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့လည်း ကြေညာချက်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလထဲ စတင်လိုက်တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အာဆီယံ မဟာဗျုဟာကျတဲ့ မိတ်ဘက်တွေအဖြစ် နိုင်ငံရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးမြှင့်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း အိမ်ဖြူတော်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကတော့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ရေး တရုတ်ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို အာဆီယံအနေနဲ့ တညီတညွတ်တည်း ရင်ဆိုင်ကြဖို့အတွက် စိတ်အားထက်သန်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရုနိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူနဲ့ ဗီယက်နမ် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် ၄ နိုင်ငံဟာ TPPT ပစိဖိတ်ရပ်ဝန်း ကုန်သွယ်ဘက် ၁၂ နိုင်ငံထဲမှာ ပါဝင်နေပြီး ဒီကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ဟာ ကြီးထွားလာနေတဲ့ တရုတ်ကို တန်ပြန်နိုင်ဖို့ စီးပွားရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အာရှဒေသကို ဦးစားပေးတဲ့ သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ မူဝါဒတွေထဲမှာ အဓိကသော့ချက်တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ အာဆီယံ အသင်းကြီးကြား ဆက်ဆံရေးဟာ ၁၉၇၇ က စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ အာဆီယံ ကုန်သွယ်ရေးဟာ ၂၀၁၃ ခုမှာ ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၂၀၆.၉ ရှိခဲ့သလို၊ အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာလည်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာ ၂၀၁၃ ခုက ဒေါ်လာ ၁၁.၁ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးလို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကို ကူးပြောင်းတဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ် အချိန်အခါသမယ ကျရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ အသီးသီးက မြို့ကြီးတွေမှာ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုဖို့ ပြင်ဆင်နေကြချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း နှစ်သစ်အတွက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ကိုရဲခေါင် က တင်ပြထားပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး၊ အတိုက်အခံပါတီက အမတ်နေရာ အများစု အနိုင်ရခဲ့တာလိုမျိုး အရေးကြီးတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာလည်း အနိုင်ရပါတီက ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အစိုးရသစ်ကို အာဏာလွှဲပြောင်းပေးတာ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ခိုင်မာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ထွန်းဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။
အခုလို နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးသွားတိုင်း အတိတ်က သင်ခန်းစာယူသလို၊ ပစ္စုပ္ပန်မှာ လမ်းမှား မရောက်အောင် သတိမူပြီး ရှေ့ဆက်သွားဖို့ လိုတယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ် ဂျိမ်းစ်တောင်းမြို့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက ဆရာတော် ဦးနန္ဒာဝံသက နှစ်သစ်အတွက် ဆုတောင်းသြ၀ါဒ မြွက်ကြားလိုက်ပါတယ်။
“ဦးဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက အချိန်ကာလကို လက်ခံထားတဲ့ ဘာသာတရားဖြစ်တယ်။ အချိန်ဟာ အင်မတန်မှ တန်ဖိုးရှိတယ်။ အချိန်ကာလတွေ ပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်း ရောက်ရှိနေတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကာလမှာ နောက်ကို ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ ရှေ့ကို သတိထားပြီးတော့ အခု ပစ္စုပ္ပန်လျှောက်နေတဲ့လမ်းကို မမှားမိဖို့က အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်။ မဇ္ဈိမပဋိပဋာလမ်းစဉ်အတိုင်း လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဦးဇင်းတို့ အနာဂတ်ဟာလည်းပဲ ဦးဇင်းတို့ တောက်ပြောင်တဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်လာမှာပါ။ လူသားတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူသားတယောက်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိတို့ နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှာ လမ်းမမှားဖို့က အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဦးဇင်းတို့က ဒုက္ခတွေအများကြီး မခံစားချင်ဘူးဆိုရင် မိမိတို့ အတိတ်က မှားတဲ့အရာတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ အဲဒီအမှားကို အမှန်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြရပါမယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ကတော့ နောက်ကိုပြန်ကြည့်၊ ရှေ့ကိုသတိထား၊ လမ်းမမှားစေနဲ့ ဆိုပြီးတော့ သြ၀ါဒပေးချင်ပါတယ်။”
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကန်တကီပြည်နယ်က မြန်မာ ကက်သလစ် သင်းအုပ်ဆရာ Father Timothy ကလည်း နှစ်သစ်မှာ သာယာငြိမ်းချမ်းပြီး တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ကမ္ဘာမြေဖြစ်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
“နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းကတော့ ဘုရားရှင်ယေရှုကနေပြီးတော့မှ လောကလူသားများအားလုံးကို စိတ်နှလုံးကို နူးညံ့စေဖို့၊ သိမ်မွေ့စေဖို့၊ နှိမ့်ချခြင်း ပါရမီအားဖြင့် တယောက်နဲ့တယောက် ကူညီဖြည့်ဆည်း ပံ့ပိုးပေးလို့ရှိရင် စစ်မက်တွေ ရန်ငြိုးရန်စတွေ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့ စိတ်ထားတွေက ပပျောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ Father ဆန္ဒပြုတာကတော့ ဘုရားရဲ့ အပြည့်စုံဆုံး အကြွင်းမဲ့ပေးဆပ်တတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပြည့်ဝဆုံးသော အသေခံခြင်းအားဖြင့် တယောက်ကိုတယောက် ရိုင်းပင်းကူညီပြီးတော့မှ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့် သာယာသော၊ ငြိမ်းချမ်းသော၊ အေးမြသော၊ တည်ငြိမ်သော၊ ဖွံ့ဖြိုးသော လူသားများရဲ့ ကမ္ဘာဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းပေးပါတယ်။”
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေ ရပ်တန့်ပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ဆိုရင် စာရွက်ပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ၊ နှလုံးသားတိုင်းမှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာနဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးမှသာလျှင် ပြည့်ဝတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရနိုင်မယ်လို့ Father Timothy က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“စစ်မက်ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဒေသတွေမှာတော့ တကယ့်တကယ်မှာတော့ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် စာရွက်ပေါ်မှာတင် လက်မှတ်ထိုးတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ နှလုံးသားတိုင်းမှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘောပင်နဲ့ ဘုရားရဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းစာရွက်ပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးမှသာလျှင် တကယ့် ပြည့်စုံပြည့်ဝတဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ စစ်မက်ဖြစ်တာ၊ တိုက်ခိုက်မှု ကင်းမဲ့တာကို စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ မခေါ်ပါဘူး။ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ အကြွင်းမဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်လိုက်တဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ကိုယ့်မှာ အာဃာတ ရန်ငြိုးရန်စ မထားတော့တဲ့ မရှိတော့တဲ့ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါမှသာလျှင် ဘုရားပေးတဲ့ ဘုရားလိုလားတဲ့ ပြည့်စုံပြည့်ဝတဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းမျိုးဖြစ်မှာ။ အဲ့သလိုမျိုး ဘုရားပေးတဲ့ အပြစ်အနာအဆာ မရှိတော့တဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံသော လူသားတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားတိုင်းမှာ လူသားတိုင်းရဲ့ ဘ၀ထဲမှာ လူသားတိုင်းနေထိုင်တဲ့ နေရာဒေသ တိုင်း၊ ပြည်နယ် တနိုင်ငံလုံးမှာ ပြည့်စုံစွာ သက်ရောက်ပါစေလို့ Father ဆုတောင်းတဲ့ သတင်းစကားလေး ပေးချင်ပါတယ်။”
လာမယ့်နှစ်သစ်မှာ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အတိတ်က ဖြစ်ရပ်တွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး မဇ္ဈိမပဋိပဋာ လို့ခေါ်တဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်နဲ့ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက နှစ်သစ်အတွက် သတင်းစကား မြွက်ကြားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲခေါင် / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
ရွေးကောက်ပွဲ အငြင်းပွားမှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အချိန် ကတ်သတ်မထား
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲ အတွင်း ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ အနိုင်အရှုံး အဖြေ တွေ ကို မကျေနပ် လို့ ကန့်ကွက် တိုင်ကြား ထားတဲ့ အမှုတွေ ကို စစ်ဆေး တဲ့ အခါ ဘယ်တော့ အပြီး ဆုံးဖြတ် ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ အချိန် ကန့်သတ်မှု မရှိဘူး လို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က ပြောပါတယ်။
ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းထားတဲ့ အမှုပေါင်း ၄၀ ရှိနေပြီး၊ အဲဒီ တိုင်ကြားစာ ထဲက တချို့ကို ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေး နေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသိန်းဦး က ဘီဘီစီ ကို ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ လွှတ်တော် သက်တမ်းဟာ ဇန်နဝါရီ လကုန်ရင် ပြီးဆုံး တော့မှာ ဖြစ်ပြီး နောက်လွတ်တော် အသစ် စတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့ အသစ် စတင်မယ့် လွှတ်တော် မှာ ကန့်ကွက် ခံထားရ လို့ အမှုကြား နာ မှု ခံယူ နေရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ လွှတ်တော် အမတ် တွေ ပုံမှန် အတိုင်း တက်ရောက် နိုင်တယ် လို့ ဦးသိန်းဦး က ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းအခုံ ဖြစ်မှုတွေကို အချိန် အကန့် အသတ် အတိတကျ မသတ်မှတ် ထား ပေမယ့် နှစ်နဲ့တော့ ချီ မကြာ နိုင်ပဲ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ခုံရုံးက လပိုင်း လောက်ပဲ အချိန်ယူကာ အပြီး အပြတ် အဆုံး အဖြတ် ပေးနိုင်တယ် လို့လည်း ဦးသိန်းဦးက ဆိုပါတယ်။
ရွေးကောက်မှာ တရားနည်းလမ်း အတိုင်း အနိုင်ရတာ မဟုတ်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ နဲ့ ငြိစွန်းကြောင်း မကျေနပ်ရင် လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးချင်း အလိုက် အနိုင်ရ ကြေညာခဲ့တဲ့ နေ့ ကနေ ၄၅ ရက် အတွင်း ကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြား နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက် ပွဲရလဒ် နောက်ဆုံး ကြေညာခဲ့တာက နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီ နောက်ဆုံး ကြေညာ ခံရတဲ့ သူတွေဟာ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာ ၄၅ ရက်အချိန် ပြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန် နှစ်သစ်ကူးကြိုည လုံခြုံရေး တင်းကြပ်
အင်းလျားကန်၊ ကန်တော်ကြီး နဲ့ သုဝဏ္ဏကွင်း အပါအဝင် လူတွေ စုဝေး ပျော်ရွှင်ကြမယ့် နေရာမျိုးတွေ ကို စာရင်း ကောက်ယူ ထားပြီး ရဲကားတွေ အသင့်ချ ထားမယ်။
နှစ်သစ်ကူး အကြိုည ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေ လုပ်ရာကနေ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားတာတွေ၊ ယာဉ် မတော်တဆမှု ဖြစ်ရပ်တွေ ပါ တွဲပြီး ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိခဲ့တဲ့ အရင့် အရင်နှစ် အတွေ့အကြုံတွေ ကို သုံးသပ်လို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အကူး အကြိုည မှာ ရန်ကုန် မြို့တော် တခွင် လုံခြုံရေး အရ ပိုပြီး စနစ်တကျ ကိုင်တွယ် နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ် ဆိုပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
အင်းလျားကန်၊ ကန်တော်ကြီး နဲ့ သုဝဏ္ဏကွင်း အပါအဝင် လူတွေ စုဝေး ပျော်ရွှင်ကြမယ့် နေရာမျိုးတွေ ကို စာရင်း ကောက်ယူ ထားပြီး ရဲကားတွေ အသင့်ချ ထားမယ်လို့ ရန်ကုန် တိုင်း ဒုတိုင်း တပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ဝင်းဗိုလ် က ဘီဘီစီ ကို ပြောပါတယ်။
နယ်မြေ အလိုက် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတွေ သုံးပြီး ရဲ လှည့်ကင်းတွေ ချ ထားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ရဲမှူးကြီး ဝင်းဗိုလ် က ဆိုပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရက ပေးထားတဲ့ လုံခြုံရေးရဲကား ၄၅စင်းကို ရန်ကုန်တိုင်း ထဲက မြို့နယ် ၄၅ မြို့နယ် မှာ တစ်စင်းဆီ လှည့်လည် မှာ ဖြစ်ပြီး တုတ် ဓား လက်နက် ကိုင်ဆောင်မှု ရှိမရှိ ကိုလည်း စစ်ဆေး ရှာဖွေဖို့ ရှိနေပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးည ဂီတပွဲတွေ၊ သန်းခေါင်းယံ ၁၂ နာရီ ထိုးကို ရေတွက်ကြတဲ့ countdown ပွဲ တွေ မှာ သောက်စား မူးယစ်တာ၊ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားတာ အပြင် ယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်ရပ် တွေဟာ နှစ်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိ ပြီး တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အရလည်း ရန်ကုန်မှာ အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ မာဒန်မြို့တွင် အသေခံဗုံးပေါက်ကွဲ၊ အနည်းဆုံး လူ ၂၅ ဦးသေဆုံး
အစ္စလာမ္မာဘတ် ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်း မာဒန်မြို့တွင် အသေခံဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ အနည်းဆုံး အရပ်သား ၂၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၇ဝ ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။
မာဒန်မြို့ရှိ အစိုးရရုံးတစ်ရုံး၏ တံခါးရှေ့တွင် ပြည်သူများက ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ပြည်လည်ရရှိရန် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ပေါက်ကွဲစေ သည့် ပစ္စည်းများ လျှို့ဝှက်သယ်ဆောင်လာသော အမျိုး သားတစ်ဦးက အသေခံဗုံးခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအသေခံဗုံးခွဲခဲ့သည့်အမျိုးသားသည် ပါကစ္စ တန်တာလီဘန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်ပွားပြီး မကြာမီတွင် အဆိုပါအဖွဲ့က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန် တာလီဘန်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံ၏အင်အားအကြီး ဆုံး အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
အစွန်းရောက်အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွအဖွဲ့များသည် နိုင်ငံ၏အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် အခြေချ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး အကြမ်းဖက်မှုများကို မကြာခဏ ကျူးလွန်လျက်ရှိသည်။
ပါကစ္စတန်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များက လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ဇွန်လမှစပြီး အဆိုပါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့များကို တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ပါကစ္စတန်တပ်ဖွဲ့၏ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှု များကို လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ယမန်နှစ်ဒီဇင်ဘာ လတွင် ပါကစ္စတန်တာလီဘန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က စစ် တပ်ပိုင် စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ဝင်ရောက်စီး နင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် ဆရာ ဆရာမ ၁၄၇ ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည်။
ယခုအသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုသည်လည်း ပါကစ္စတန် တပ်ဖွဲ့၏တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုကို တုံ့ပြန်သည့်လက် တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံရဲအရာရှိများက ယူဆကြသည်။
ရေကြီးမှုနှင့် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုများကြောင့် အမေရိကန်တွင် သေဆုံးသူ ၄ ဦးထိ မြင့်တက်
ဝါရှင်တန် ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုများကြောင့် ရေကြီးရေလျှံ မှုနှင့် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုများကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက် ၄၈ ဦးအထိ ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုနှင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ပြည်နယ်ငါးခုတွင် လူ ၂၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ပွားသည့် လေဆင် နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုများကြောင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ်အပါအဝင် တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်များတွင် လူ ၂ဝ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့်သီတင်းပတ်ကတည်းက အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုများရှိခဲ့သည်။ ရေကြီးမှုကြောင့် မစ်ဆူရီပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းဒေသအတော်များများတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရှိခဲ့ပြီး နေအိမ် ခေါင်မိုးများအထိ ရေလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
မစ်ဆူရီပြည်နယ်အစိုးရက အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပြီး ဒေသခံပြည်သူများကို ဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းကြရန် ညွှန်ကြားထားသည်။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအစောင့်တပ်ကိုလည်း အကူအညီတောင်းခံထားသည်။
မစ်ဆူရီပြည်နယ်ရှိ မစ္စစ္စပီမြစ်တွင်လည်း မြစ်ရေများလျှံတက်နေပြီး ရာသီဥတုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အထိ ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ၀န်းကျင် ရှိတဲ့ FIFA ရဲ့ ဘဏ်စာရင်းတွေ ထိန်းချုပ်ခံရ
ကမ္ဘာ့ ဘော်လုံး အဖွဲ့ချုပ် FIFA နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဘဏ်စာရင်းတွေ ကို ဆွစ်ဇာလန် တရားရေး ဌာန က ထိန်းချုပ် လိုက် တာမှာ အဲဒီ့ ဘဏ်စာရင်း တွေ ထဲ ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။
FIFA ဟာ ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက် ခြစားမှု အရှုပ်အရှင်း တွေနဲ့ အမေရိကန် အာဏာပိုင်တွေ ရဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးတာကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် အစိုးရ ရှေ့နေတွေ တောင်းဆို ထားတဲ့ အတိုင်း သက်သေ အထောက်အထားတွေ ရဲ့ ပထမ တစ်သုတ်ကို လွှဲပြောင်း ပေးလိုက်ပြီ လို့ ဆွစ် အာဏာပိုင် တွေက ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ကစားပွဲ ပွဲကြီးတွေ ကို ပြသခွင့် မူပိုင်ရရှိဖို့ အတွက် FIFA အရာရှိ တွေကို လာဘ်ငွေတွေ ပေးခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ စွဲချက် တွေကို အမေရိကန် တွေက စုံစမ်း နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဆွစ်အာဏာပိုင်တွေ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့တဲ့ ငွေ အဝင်အထွက် ဘဏ်စာရင်း စာရွက်စာတမ်းတွေ ဟာ FIFA ထိပ်တန်း အရာရှိ တွေကို စွဲဆို နိုင်ဖို့ အဓိက သက်သေတွေ ဖြစ်လာမယ် လို့ မျှော်လင့် ရပါတယ်။
လိင်ပိုင်းကျူးလွန်မှု ပုဒ်မတပ်ပြီး ကော့စ်ဘီ့ကို တရားစွဲပြီ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု က နာမည်ကျော် ဟာသ ပညာရှင် သရုပ်ဆောင် ဘီလ်ကော့စ်ဘီ ကို လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာ ပြုမှု ပုဒ်မ တွေ တပ်ပြီး ပင်ဆယ်လ်ဗေးနီးယား ပြည်နယ် က အစိုးရရှေ့တွေ က တရား စွဲဆို လိုက် ပါတယ်။
အသက် ၇၈ နှစ် အရွယ် မစ္စတာ ကော့စ်ဘီ ဟာ သူ့အချိန် သူ့အခါ တုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အနုပညာကြေး အကြီးဆုံး ရခဲ့သူ ဖြစ် ပြီး လူသိများ အထင်ရှားဆုံး ဖျော်ဖြေရေး အနုပညာရှင် တွေထဲ ပါဝင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ ကော့စ်ဘီဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် တုန်းက ဖီလာဒဲဖီးယားမြို့အနီးက သူ့ရဲ့ နေအိမ်မှာ အဲန်ဒရီယာ ကော့စ်စတန်း ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကို ဆေးခတ်ပြီး လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စော်ကားခဲ့တယ် ဆိုပြီး စွပ်စွဲ ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အမျိုးသမီးနဲ့ နှစ်ဦး သဘောတူ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှု ရှိခဲ့တယ် လို့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ မစ္စတာ ကော့စ်ဘီက ကျမ်းကျိန် ထွက်ဆို ခဲ့ပြီး၊ အခုတော့ မစ္စတာ ကော့စ်ဘီကို ပထမဆုံး အကြိမ် ရာဇဝတ်မှု ပုဒ်မတပ် တရားစွဲဆို လိုက်တာပါ။
အဲဒီ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်အသစ်တွေ ဒီနှစ် နွေရာသီတုန်းက ထပ်မံ ပေါ်ထွက် လာတဲ့ အတွက် အမှုကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။